AZG ရဲ့ သရုပျသကနျအမှနျကို ဆနျးစဈ အံထုတျခွငျး – Kyaw Zaw Oo's Blog
October 22, 2012 March 15, 2019 kyaw zaw oo
AZG ရဲ့ သရုပျသကနျအမှနျကို ဆနျးစဈ အံထုတျခွငျး
အောကျတိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂
ကိုငွိမျးမောငျ* တဈယောကျ အသဈစကျစကျဖှငျ့တော့မယျ့ AZG ရဲ့ “ရှုခငျးသာ” ဆေးခနျးကိုလာဖို့ ဖိတျစာရထားတဲ့အတိုငျး၊ မနကျ ကိုး နာရီလောကျမှာ ဆေးခနျးကိုရောကျလာတဲ့အခါ မနကေ့အထိ လှုပျလှုပျရှားရှားနဲ့ ဖှငျ့ပှဲအရေးအတှကျပွငျဆငျရငျး စညျကားနခေဲ့တဲ့ နှဈထပျ တိုကျအိမျကလေးဟာ သော့ခတျပိတျလကျြသားဖွဈနတောကို တှရေ့တယျ။ တိုကျရဲ့ဝငျဝအုတျတိုငျမှာ အသေရီးဆိုဒျစာရှကျတဈ ရှကျ ကပျထားတယျ။ စာရှကျမှာရေးထားတာက “ဘကျလိုကျမှုရှိ၊ ပှငျ့လငျး မွငျသာမှုမရှိ၊ ကုလား (ဘင်ျဂါလီ) အရေး ဆောငျရှကျပေးသော AZG (MSF) အား အလိုမရှိ” လို့ ရေးထားတယျ။
နောကျထပျ ဆယျမိနဈလောကျကွာတော့ လူလေးငါးခွောကျယောကျ ဆိုငျကယျနဲ့ရောကျလာပွီး တိုကျရှမှေ့ာရပျနတေယျ။ ခဏနတေော့ အမြိုးသားတှေ အမြိုးသမီးတှေ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ အရှိုရှိုရောကျလာကွတာ လူအယောကျနှဈဆယျ သုံးဆယျလောကျဖွဈလာတယျ။ လူစုလူဝေးကွီးထှားလာပွီး နောကျထပျငါးမိနဈလောကျအကွာမှာ AZG ကို ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျကွောငျးရေးထားတဲ့ ဗီနိုငျးတှကေို ဖွနျ့ ကိုငျပွီး ဓါတျပုံအရိုကျခံကွတယျ။ ပရိတျသတျက လကျခုပျဝိုငျးတီးကွပွီးတော့ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးပဲ လူစုခှဲလိုကျကွတယျ။
ဆန်ဒပွကွမယျ့နရောကို အစောဆုံးရောကျလာတဲ့လူတှထေဲကတဈယောကျကို သတငျးဌာနတဈခုက ကငျမရာကိုဒေါကျတိုငျပျေါတငျပွီး အကအြန အငျတာဗြူးနတောကို ကိုငွိမျးမောငျတှခေဲ့သေးတယျ။ တှေးစရာတှေ၊ စိတျပူစရာတှအေပုံအပငျနဲ့ ကိုငွိမျးမောငျတဈယောကျ သူတို့အဖှဲ့ရဲ့ ရုံးရှိရာခွံလေးကို ပွနျလာခဲ့တယျ။
ကိုငွိမျးမောငျတို့ အဖှဲ့ကို Utopia လို့ချေါပါတယျ။ Utopia ဟာ စဈတှနေဲ့ ပတျဝနျးကငျြက PLHIV (People Living with HIV ၊၀ါ၊ HIV ဝဒေနာရှငျ) တှကေို တတျအားသမြှ အကူအညီတှပေေးနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးကလေးဖွဈတယျ။ အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ကိုငွိမျးမောငျ ကိုယျတိုငျ ဝဒေနာရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။
ဆန်ဒပွပှဲအပွီး မဖှငျ့လိုကျရတဲ့ AZG ဆေးခနျးရှမှေ့ာ အငျတာဗြူးနတေဲ့လူကတော့ ကြှနျတျောဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ သာမနျစဈ တှမွေို့သားတဈဦး တကျကွှလှုပျရှားသူ activist တဈဦးဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျဟာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတှဖေူ့းပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ တကယျတော့ ဆန်ဒပွပှဲမတိုငျခငျတဈရကျ မနကျပိုငျးမှာ ကြှနျတျောက ကိုငွိမျးမောငျကိုတှခေ့ငျြတဲ့အတှကျ ကွားလူတဈယောကျက ဖုနျးဆကျပေးပါသေးတယျ။ ကိုငွိမျးမောငျအနနေဲ့ တကယျ မအားမလပျဖွဈနတေဲ့အတှကျ ကြှနျတျောနဲ့ အဲသညျနကေ့ မတှလေို့ကျရပါဘူး။ AZG ဆေးခနျးဖှငျ့ဖို့ကိစ်စနဲ့ ကိုငွိမျးမောငျတဈယောကျ မ အားမလပျ ဖွဈနတောလညျး ဖွဈရငျဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဆန်ဒပွကွတာပွီးသှားလို့ မှနျးလှဲတဈနာရီလောကျမှာ ကိုငွိမျးမောငျက ကြှနျတျောဆီကိုဖုံးဆကျပါတယျ။ မနကေ့ ဆောရီးပါဗြာတဲ့။ ဒီနေ့ အားသလား၊ အခုအားသလားတဲ့။ သူခြိနျးတဲ့ သူတို့ရဲ့ Utopia ရုံးခွံလေးဆီကို ကြှနျတျော ခကျြခငျြးဆိုငျကယျတဈစီးနဲ့ လိုကျသှားပါတယျ။
“ခငျဗြား အငျတာဗြူးလုပျနတောကို မနကျက ကြှနျတျောတှခေဲ့သေးတယျ” လို့ သူက ရယျကြဲကြဲနဲ့ ပွောပါတယျ။
အဲ . . . ထူးဆနျးတာတဈခုက၊ AZG ဆေးခနျးကပေးတဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ အသကျဆကျနရေတဲ့လူတဈယောကျကို AZG ဆေးခနျးမဖှငျ့ရအောငျ လုပျဆောငျရာမှာပါတဲ့ လူတဈယောကျက လာတှရေ့တာ သိပျပွီးကွောငျတကျတကျ ဖွဈမနပေါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ AZG ကို ရခိုငျလူထုက တဈနမေ့ဟုတျ တဈနေ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆနျ့ကငျြတော့မှာကို ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျစလုံး သိနပွေီးသားဖွဈကွလို့ပါပဲ။
“ဒါကတော့ဗြာ . . . ၊ ရခိုငျတဈမြိုးသားလုံးအရေးကို ကြှနျတျောတို့ PLHIV အယောကျ သုံးရာလောကျအရေးနဲ့ ဘယျလိုမှလဲလို့မှမရတာ။ ကြှနျတျောနားလညျပါတယျ” လို့ သူကဆိုရှာတယျ။
သူတို့ Utopia အဖှဲ့အကွောငျးကိုမေးနစေဉျမှာပဲ လူနှဈယောကျ ဆိုငျကယျတဈစီးနဲ့ မယောငျမလယျလုပျနရေငျး၊ ခဏနတေော့ ခွံထဲကို ဝငျလာတယျ။ သူတို့ကပွောတယျ။ ဝဒေနာရှငျတဈယောကျအတှကျ ART လိုနတေဲ့အတှကျ ဆေးဖွနျ့ပေးတဲ့ outreach worker ဝနျထမျးကို ဖုံးဆကျတာ ဖုံးပိတျထားတယျတဲ့။ ဘယျလိုလုပျရမှနျးမသိဘူးတဲ့။
“အေးဗြာ၊ ဆေးတှကေ အခုပိတျထားတဲ့ဆေးခနျးထဲမှာဗြ။ နားလညျကြှမျးကငျြသူဝနျထမျးကထုတျပေးမှ ရမယျ” လို့ ကိုငွိမျးမောငျက ရှငျး ပွတယျ။
စောစောပိုငျးက MSM (Men who have Sex with Men) နှဈယောကျဟာ AZG က နိုငျငံခွားသူအမြိုးသမီး ဒေါကျတာအယျလဆာကို သှားတှပွေီ့း ဆေးထုတျပေးဖို့ သှားတောငျးသေးတယျတဲ့။ ကြှနျတျောတို့ရှကေ့ ကိုလူစိမျးနှဈယောကျထဲက တဈယောကျကပွောပွတယျ။ အဲသညျ နိုငျငံခွားသူ ဒေါကျတာမမက ပွောလိုကျတယျတဲ့။ ငါရော အခွားဒသေခံဝနျထမျးတှပေါ ဆေးခနျးကိုသှားပွီး ဆေးမထုတျပေးရဲဘူး၊ အသကျအန်တရာယျရောကျမှာကို စိုးရိမျတယျတဲ့။ နငျတို့ဆေးလိုခငျြရငျ ဆန်ဒပွတဲ့လူတှဆေီက သှားတောငျးပါတဲ့။ ငါတို့တော့ မပေးနိုငျဘူး လို့ ပွောတယျတဲ့။
ကိုယျမဲမရတဲ့ရပျကှကျကို ပွညျခိုငျဖွိုးအမတျတဈယောကျက မလိုတမာလသေံနဲ့ ပွောပုံနဲ့တူလိုကျတာလို့ ကြှနျတျောတှေးမိတယျ။
ကိုလူစိမျးနှဈယောကျက မှတျခကျြတဈခုပေးတယျ။ AZG က ဒီလောကျတောငျ ဘင်ျဂါလီဘကျကိုလိုကျနတော။ ဒီလိုဖွဈလာမှာကို တားလို့ မရဘူးဗလြို့ သူတို့ကဆိုတယျ။
အဲသညျ လူနှဈယောကျထှကျသှားပွီးနောကျပိုငျးကမြှ ကိုငွိမျးမောငျက ကြှနျတေျာ့ကို လေးနကျစိုးရိမျတဲ့မကျြနှာနဲ့မေးတယျ။ အေးဗြာ၊ ဘယျ လို လုပျရမလဲမသိဘူး၊ ရနျကုနျမှာလိုလညျး ဆေးဆိုငျတှကေဝယျလို့ရတာမဟုတျဘူးလို့ ကိုငွိမျးမောငျကညဉျးတော့၊ ကြှနျတေျာ့ အသိ တဈယောကျကို လှမျးမေးကွညျ့ရတယျ။
လောလောဆယျကတော့ စဈတှပွေညျသူ့ဆေးရုံကွီးက ကာလသားရောဂါဌာနကိုသှားပါတဲ့။ ART ဆေးတှကေိုတော့ အထှထှေရေောဂါကု သမားတျောကွီးက ကိုငျထားတယျတဲ့။ သူတို့ရဲ့စနဈ ပရိုဆီဂြာလေးကိုဖွတျသနျးပွီးရငျ ဆေးရလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျတဲ့။ အဖွတေဈခု ထှကျ လာတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒါက လတျတလောဖွရှေငျးဖို့ ထှကျပေါကျတဈသှယျလို့ပဲ ယူဆရတယျ။ AZG ကလုပျနခေဲ့တဲ့ လုပျငနျးနရောကို ဝငျယူဖို့၊ တာဝနျ ဝငျရောကျထမျးဆောငျဖို့၊ AZG လိုပဲ ရံပုံငှကေိုလကျခံယူဖို့ အဖှဲ့အစညျးတဈရပျလိုလာလိမျ့မယျ။ စဈတှကေ ရှဂေရုဏာဆေးခနျးလို ဆရာ ဝနျတှဦေးဆောငျတဲ့ အဖှဲ့အစညျးကတော့ဖွငျ့ အဲသညျစှမျးရညျကိုတညျဆောကျပွီး နရောဝငျယူနိုငျလိမျ့မယျလို့ ထငျရတယျ။
ဒါအတှကျ Pheonix တို့၊ Myanmar Positive Group (MPG) တို့၊ 3N Network တို့က AZG ရဲ့ HIV ဆေးပေးပရိုဂရမျကို ဆကျခံတဲ့ အဖှဲ့အစညျးကို ဘယျလိုကူညီထောကျပံ့နိုငျမလဲ၊ ဘယျသူတှကေမြား ဒီအတှကျ ကွားဝငျညှိနှိုငျးပေးမလဲ . . . စသညျဖွငျ့ စသညျဖွငျ့ မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာကနျြသေးတယျ။
AZG (ချေါ) MSF-Holland ရဲ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျးကို ဝငျလာရတဲ့အဓိကရညျရှယျခကျြဟာ သူတို့အချေါ ရိုဟငျဂြာ ကြှနျတျောတို့အချေါ ဘင်ျဂါ လီတှအေတှကျ အန်တိမရညျမှနျးခကျြထားပွီးဝငျလာတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲသညျ ရညျမှနျးခကျြနဲ့ မွနျမာပွညျကိုသှားစဖေို့ အလှူရှငျတှရေဲ့ ငှေ အားမောငျးနှငျမှုနဲ့ ဒီကိုရောကျလာကွတာဖွဈပါတယျ။
MSF အပိုငျးအသီးသီးတို့ရဲ့ မွနျမာပွညျကိုဝငျရောကျလှုပျရှားမှုသမိုငျးအသေးစိတျကို MSF ရဲ့ဝကျဘျဆိုဒျပျေါမှာပဲ ရေးတငျထားတဲ့ ဒေါကျ တာ ဖီယိုနာတယျရီ (Dr Fiona Terry) ရေးသားတဲ့ Myanmar. “Golfing with the Generals” ဆောငျးပါးမှာ တိတိကကြ သရုပျမှနျကို သိရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီဆောငျးပါးကိုဖတျကွညျ့ရငျ alibi project (မကျြနှာဖုံး ရုပျပွစီမံကိနျး) အစရှိတဲ့ ထူးဆနျးသောဝေါဟာရ အသဈ အဆနျးတှေ တှရေ့ပွီးသကာလ ရနေံငှကေို နောကျခံပွုထားတဲ့ NGO တှနေဲ့ပတျသကျလို့ ဗဟုသုတမြားစှာတိုးပှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာပွညျကိုဝငျရောကျအလုပျလုပျခဲ့ကွတဲ့ MSF ရဲ့ အပိုငျးခှဲ သုံးပိုငျးဖွဈတဲ့ MSF-France၊ MSF-Switzerland နဲ့ MSF-Holland တို့အ နကျမှာ ပထမဆုံးမွနျမာနိုငျငံနဲ့ ထိစပျအလုပျလုပျတာက MSF-France အပိုငျးဖွဈပါတယျ။ MSF-France ဟာ ထိုငျး-မွနျမာ နယျစပျတောကျ လြှောကျမှာ မွနျမာနိုငျငံကိုဝငျမလာပဲ ၁၉၈၄ ခုနှဈလောကျကတညျးက နှဈပေါငျးမြားစှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ အလုပျလုပျခဲ့တယျ။ မွနျမာ ပွညျထဲကိုဝငျလာဖို့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျလြှောကျထားတဲ့အခါ အောကျပိုငျးဗြူရိုကရကျတှကေ ထောကျခံပေးလိုကျပမေယျ့ ဗိုလျခြုပျကွီးတှေ က စိစဈတဲ့အဆငျ့ကို ရောကျတဲ့အခါကတြာ့၊ ထိုငျးနယျစပျ အကူအညီပေးရေးလှုပျရှားဆောငျရှကျမှုတှေ KNU နဲ့ ဆကျစပျမှုတှကွေောငျ့ ပယျခခြွငျးခံရတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ MSF-Holland က (ဘင်ျဂါလီ) ရိုဟငျဂြာအရေးနဲ့ပတျသကျလို့ ဝငျရောကျဖို့အတှကျ လုပျဆောငျတဲ့နရောမှာ သတိကွီးစှာထားပွီးလုပျဆောငျပါတယျ။ ပထမဦးဆုံးအခကျြအနနေဲ့ ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျမှာအလုပျလုပျနကွေတဲ့ MSF-France နဲ့ သူတို့ကို ဆကျစပျမမွငျ မိအောငျ MSF-Holland ဆိုတဲ့ သူတို့နာမညျအရငျးမသုံးပဲ သူတို့ရဲ့ ဒတျချြဘာသာ နာမညျ AZG (Artsen zonder Grenzen) ကိုခံယူပါတယျ။ MSF ကိုမသုံးပဲ AZG ဆိုတဲ့နာမညျကိုသုံးတာကွောငျ့ MSF အသိုကျအဝနျးရဲ့ မကျြခုံးပငျ့ကွညျ့မှုကို ခံရသျောငွားလညျး ဒီလိုမကျြနှာ ဖုံးစှပျ လုပျရပျကွောငျ့ အောငျမွငျသှားပါတယျ။ AZG လို့ပဲချေါချေါ MSF-Holland လို့ပဲချေါချေါ သူတို့အဖှဲ့ဟာ မွနျမာပွညျထဲကို အောငျအောငျ မွငျမွငျဝငျလာနိုငျခဲ့တယျ။ ရုံးစိုကျအခွခေမြယျ့ AZG ရဲ့ ပထမဆုံး တရားဝငျကိုယျစားလှယျတျော ပုဂ်ဂိုလျမွတျဟာ ၁၉၉၂ ခုနှဈ ဇှနျနဝါရီလမှာ ရနျကုနျမွို့ကို ဆိုကျရောကျတျောမူပါတယျ။
UNICEF ရဲ့ ကမကထပွုမှုအားဖွငျ့ လုပျငနျးတှကေို စတငျခြိတျဆကျတယျ။ UNICEF နဲ့ အဆောကျအအုံ တဈခုတညျးမှာ ရုံးခနျးဖှငျ့တယျ။ ကြုပျတို့ရှာမှာ အရငျရောကျနှငျ့နတေဲ့ UNICEF ကတော့ AZG ကို ရှာကာလသားတှနေဲ့မိတျဆကျပေးပွီး လမျးကွောငျးရှငျး ပေးတယျ လို့ပဲ ဆိုပါတော့။
AZG က အကှကျကကြ ခွလှေမျးတှလှေမျးလာပုံကို ဒေါကျတာဖီအိုနာတယျရီက ဒီလို ရေးထားတယျ။
During the long period of negotiations to enter the country, AZG’s attention focused on the plight of Rohingyas in Rakhine State, followingagovernment crackdown on dissent in 1991 and 1992 which provoked 250,000 to flee to Bangladesh. But access to Rakhine State was not what the government had in mind, and in its first year AZG was directed towards providing healthcare in Shwepyithar township on the outskirts of Yangon. AZG agreed to this proposal for “strategic” reasons, asa“foot-in-the-door” through which to build relationships of trust with officials, and encourage openings in areas with more pressing needs.
AZG ရဲ့ အဓိကအာရုံစူးစိုကျနတေဲ့ အရေးအရာက ရခိုငျပွညျနယျထဲက ဘင်ျဂါလီ (ရိုဟငျဂြာ) တှရေဲ့အရေးဖွဈပမေယျ့၊ ရခိုငျပွညျနယျဘကျကို AZG ကို သှားလာဆကျသှယျခှငျ့ပေးဖို့ကို အစိုးရက စိတျကူးထဲမှာတောငျ ထညျ့မထားတဲ့အခြိနျဆိုတော့ ရနျကုနျ၊ ရှပွေညျသာမွို့နယျမှာ ဆေးခနျးတဈခနျးဖှငျ့တဲ့ ခွလှေမျးကို “မဟာဗြူဟာမွောကျ” ခွလှေမျးအနနေဲ့ စတငျလှမျးလိုကျပါတယျတဲ့။
ဒါဟာ သူတို့အချေါ “foot-in-the-door” လို့ချေါတဲ့ သကျဆိုငျရာအရာရှိမြားနဲ့ ခဈြကွညျမှုတညျဆောကျရေး ခွလှေမျးမြိုးဖွဈတယျ။ ဒါက မှတဈဆငျ့ အရာရှိကွီးတှနေဲ့ ဂေါကျရိုကျတာတို့၊ အရာရှိကွီးတှကေို လကျဆောငျပေးတာ မိတျဆှဖှေဲ့တာတို့လုပျပွီး မိမိတို့သှားခငျြတဲ့ နရောဆီ တဖွညျးဖွညျးရောကျအောငျ သှားနိုငျမှာမို့လို့ဖွဈတယျ။
တဈခါတော့ AZG ရဲ့အကွီးအကဲဖွဈသူဟာ ကခငျြပွညျနယျထဲက ကြောကျတူးကွတဲ့ နရောတဈနရော (ဖားကနျ့လား ဘာလားတော့မသိ)မှာ ဆေးခနျးဖှငျ့ဖို့အရေးကို ပွောခငျြတဲ့အတှကျ ကခငျြစဈတိုငျးမှူးကို တှခှေ့ငျ့တောငျးတာ တှခှေ့ငျ့မရ ဖွဈနပေါသတဲ့။ နောကျဆုံးမတော့ မွဈကွီးနားဂေါကျကလပျကို သှားပွီးဂေါကျရိုကျလိုကျတာ အားလုံးအဆငျပွသှေားပါလရေောတဲ့။ ဒါက သူတို့သုံးနကြေ foot-in-the-door diplomacy။ ခဉျြးကပျရငျးနှီးမှုရအောငျလုပျပွီး ကိုယျလိုခငျြတာရအောငျယူသှားတာ။
ဒါအပွငျ AZG က သုံးတဲ့ နောကျထပျနညျးတဈနညျးကို Medical diplomacy လို့ ချေါရမယျ လို့ဆိုပါတယျ။ ဆေးပညာပိုငျးအရ မိမိတိုရဲ့ အသုံးတညျ့မှုကို ခသြုံးပွီး လိုခငျြတဲ့နရောကို ရောကျအောငျသှားတာဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ ငှကျဖြားဆေးယဉျသှားတာတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ AZG ဟာ ၁၉၉၅ ခုနှဈ ရခိုငျ ဒသေမှာ လလေ့ာမှုတဈရပျလုပျတယျ။ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံ မှာသုံးနတေဲ့ ငှကျဖြားဆေးပေးစနဈရဲ့ ရခိုငျဒသေမှာ ဆေးမတိုးဖွဈနပေုံကို ဖျောထုတျတငျပွနိုငျခဲ့တယျ။ ဒီအောငျမွငျမှုနဲ့အတူ AZG ရဲ့ လုပျရေးလုပျခှငျ တောငျးဆိုပိုငျခှငျ့ တိုးတကျလာခဲ့တယျ။ ဒါမြိုးကတြော့ medical diplomacy လို့ ချေါပါတယျ။
ရခိုငျနယျစပျက ဘင်ျဂလီတှဟော သူတိုအဖို့ အကြိုးခံစားခှငျ့ပေးရမယျ့ ပငျမလူဦးရထေု (target population) ဖွဈတယျဆိုတာကို ဘယျ တော့မှမမတေဲ့ AZG အတှကျ သူတို့အရမျးသှားခငျြလှတဲ့ ရခိုငျပွညျကိုရောကျအောငျသှားနိုငျတဲ့အခှငျ့အလမျးက ၁၉၉၃ ဧပွီလမှာ ပျေါလာ ပါတယျ။ ငှကျဖြားရောဂါ ပရိုဂရမျတှလေုပျမယျဆိုတဲ့ AZG ဟာ စဈတှမွေို့မှာ ရုံးဖှငျ့ခှငျ့ရတယျ။
ဒီလိုတဈရှရှေ့တေို့းသှားရငျးနဲ့ နောကျထပျ လေးနှဈကြျောအကွာ ၁၉၉၈ ခုနှဈ ဇှနျနဝါရီလမှာ ဘင်ျဂါလီလူဦးရေ ပွညျ့လြှံနတေဲ့ မောငျတော မွို့မှာ AZG ရုံးဖှငျ့ခှငျ့ရပွီး နှဈပေါငျးမြားစှာ အကောငျအထညျဖျောဖို့ ကွိုးစားနခေဲ့ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ မဟာရညျမှနျးခကျြကွီးတှထေဲက တဈရပျ အောငျမွငျသှားပါတယျ။
မိမိတို့ AZG ရဲ့ အဓိကရညျမှနျးခကျြဟာ ဘင်ျဂါလီ (ရိုဟငျဂြာ)တှအေတှကျ တောငျးဆိုတိုကျပှဲဝငျဖို့ (AZG’s primary goal of advocacy on behalf of the Rohingyas) ဆိုတဲ့ AZG အဖှဲ့သားမြားအတှကျ မဟာခွလှေမျးကွီးတဈရပျဖွဈတယျ။
မိမိတို့ အလုပျလုပျနရေတဲ့ နယျမွထေဲမှာ လကျတှကေကြ တဈလှမျးခငျြးလှမျးသှားပွီး ဆေးဖကျဆိုငျရာဝနျဆောငျမှုမြားကို လုပျဆောငျရငျး ဘင်ျဂါလီ (ရိုဟငျဂြာ) အရေးအတှကျ တဈဆငျ့ခငျြး အုတျမွဈခသြှားလိုတဲ့ ရနျကုနျက AZG ရုံးအုပျခြုပျသူမြားရဲ့ ခြီတကျနှုနျးကို နှေးကှေးလှ တယျဆိုပွီး၊ ဟျောလနျနိုငျငံ အမျစတာဒမျမွို့ရုံးခြုပျက လူကွီးမငျးတှကေ မကနြပျနိုငျကွတာတှေ ခဏခဏ ဖွဈတတျတယျလို့ AZG ရဲ့ အတှငျးလူတှကေဆိုပါတယျ။
ဒီလို မကနြေပျနိုငျတာတာ အထူးသဖွငျ့ အလှူရှငျ donors တှနေဲ့ တံခါးပိတျဆှေးနှေးပွီးတိုငျးမှာ ဖွဈတတျတယျ။
မွနျမာပွညျ မောငျတောနယျစပျက ဘင်ျဂါလီကုလားအရေးကိုဆောငျရှကျတာ နှေးကှေးလှတယျဆိုပွီး ဒေါသထှကျရလောကျအောငျ အမျစ တာဒမျ AZG လူကွီးမငျးမြားနဲ့ တံခါးပိတျဆှေးနှေးကွသူတှဟော ဘယျသူတှမြေားပါလိမျ့။
အကငြ်္ီရှညျ ဝတျရုံဖွူကွီးတကားကားနဲ့ ခေါငျးခွုံဘောငျးရဈအကအြနနဲ့ အာရပျရနေံနိုငျငံတှကေ အာရပျကွီးတှမြေားလား၊ ဒါမှမဟုတျ သူတို့ က ကိုယျစားလှယျတှအေနနေဲ့လှတျလိုကျတဲ့ ဦးဟနျညောငျဝလေိုလူတှလေား။
ဒီလို လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု အကူအညီဆိုတာတှကေို အသုံးခပြွီး၊ လိုခငျြတဲ့ နိုငျငံရေးရလဒျထှကျလာအောငျ မိမိတို့အားပေး နတေဲ့အုပျစု အငျအားကွီးသထကျကွီးလာအောငျ ပုံဖျောလုပျယူနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတာကို အဲဒီအာရပျကွီးတှလေညျး သိတယျ၊ ဦးဟနျညောငျ ဝလေညျးသိတယျ။ AZG က လူ့အခှငျ့အရေး အရခွေုံတှကေလညျးသိတယျ။ ကြှနျတျောလညျးသိတယျ။ ဖီအိုနာ တယျရီလညျးသိတယျ။
ဒါတှကေို အတှငျးကကြ အသအေခြာသိတဲ့လူတဈယောကျကတော့ နိုငျငံရေးသိပ်ပံ အဓိကနဲ့ဘှဲ့ရပွီး MSF မှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ အလုပျလုပျဖူး တဲ့၊ ကမ်ဘာအနှံ့က သှေးမွကြေ ပဋိပက်ခတှကွေားမှာ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ အလုပျလုပျဖူးတဲ့၊ ထောကျပံရေး အကူအညီတှဟော အုပျစုဘကျပွိုငျ မှုတှကေို သွဇာသကျရောကျမှုရှိတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး ကို ခရစေတှေ့ငျးကြ စာတတနျပတေဖှဲ့ ရေးသားဖူးတဲ့ ဖီအိုနာတယျရီ (Fiona Terry) ဖွဈပါတယျ။
သူ ဘာပွောသလဲဆိုတာကို ဆကျပွီးဆှေးနှေးပါတယျ။
လူသားစာနာကူညီထောကျပံ့မှု ရဲ့ နိုငျငံရေး (politics of humanitarian aids)
NGO အရေးဟာ နိုငျငံရေးဖွဈတယျလို့ ဆိုလိုကျရငျ မရယျရငျတောငျမှ ပွုံးတုံ့တုံ့ လုပျမိကွမယျ့သူတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မရယျကွပါနဲ့။
ပဋိပက်ခနယျမွအေတှငျးက လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု အကူအညီတှဟော ဖကျပွိုငျနကွေတဲ့ အုပျစုတှေ ရဲ့ခြိနျခှငျလြှာကို လိုသလို ခြိနျညှိပေးလို့ရတယျ။ တဈဖကျကို အငျအားပိုကွီးစပွေီးတော့ တဈဘကျကို အငျအားခြိနဲ့သှားစတေယျ။
တဈခြိနျကရြငျ အဲသညျ အငျအားကွီးလာတဲ့ဘကျက အငျအားခြိနဲ့နတေဲ့ဘကျကို မြိုးတုံးသတျဖွတျတာမြိုးဖွဈလာရငျ တကယျသတျတဲ့လူတှရေဲ့လကျမှာ သှေးစှနျးရုံမက ဒီလိုဖွဈရပျမြိုးဖွဈလာအောငျ လုပျပေးတဲ့ အထောကျပံ့အကူအညီပေးရေးအဖှဲ့တှရေဲ့ လကျမှာလညျး သှေးပစှေနျးနပေါတယျ။
တညျ့တညျ့ပွောရမယျဆိုရငျ မောငျတောမှာ သဆေုံးသှားတဲ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသား ဗမာတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ သှေးတှဟော AZG တို့ ACF တို့လို NGO တှရေဲ့လကျတှမှော ပစှေနျးနတေယျ။ သူတို့ရဲ့ နှုတျခမျးမှာ ပကြေံနတေယျ။ သူတို့နတေို့ငျး ညစာစားတဲ့ ပနျးကနျပွားတှမှော မောငျတော နဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျက တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ သှေးတှေ စီးကနြတေယျ။
ဒီလိုမြိုး လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု အကူအညီ (humanitarian aids) က ကောငျးကြိုးမပေးပဲ ဆိုးကြိုးပေးတဲ့ ဖွဈရပျဟာ ဒီလို ဘူးသီးတောငျ မောငျတောမှာ သာမက ကမ်ဘာအရပျရပျမှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖွဈဖူးတယျ။
(၁) ရဝမျဒါ။ ၁၉၉၄ နဲ့ ၁၉၉၆ အကွား ဇိုငျယာနိုငျငံမှာ ရှိနခေဲ့တဲ့ ရဝမျဒါ ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော တကယျ့ ဒုက်ခသညျအစဈတှေ နဲ့ မြိုးတုံးသတျဖွတျမှုမှာ ပါဝငျသူတှေ ရောနှောနခေဲ့တယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒုက်ခသညျ အယောငျဆောငျ တိုကျခိုကျရေးသမားတှကေပဲ ထောကျပံ့ရေးပစ်စညျးတှကေို လကျဝါးကွီးအုပျတယျ။ တိုကျခိုကျရေးသမားတှဟော နစေ့ဉျ ဒျေါလာသနျးခြီတဲ့ ပမာဏနဲ့ ဝငျလာတဲ့ ဒုက်ခသညျတှအေတှကျ ထောကျပံ့ရေးပစ်စညျးတှကေို ခယျြလှယျတယျ၊ သုံးစှဲတယျ။ အဲဒါတှထေဲကနေ တဈလ တဈလကို ဒျေါလာသနျးခြီပွီးခိုးတယျ။ တိုကျခိုကျရေးသမားတှေ လိုအပျတဲ့ ကား၊ ယာဉျ၊ ဆကျသှယျရေး အစခပျသိမျးကို ဒုက်ခသညျထောကျပံ့မှုကှနျရကျကနေ အလကားရတယျ။ ဒါတှကေို သုံးစှဲ အငျအားဖွညျ့တငျးပွီး မြိုးတုံးသတျဖွတျမှုတှကျေို လုပျလိုကျတာ လူပေါငျး နှဈသိနျးကြျော သတေယျ။ ဒါ့အတှကျ ဘယျသူတှမှော တာဝနျရှိသလဲ။
(၂) ၁၉၉၁-ခုနှဈ၊ အီရတျပိုငျ ကာဒစ်စတနျဒသေ။ ဆကျဒမျဟူစိနျရဲ့ နှိပျစကျညှဉျးပနျးမှု ဒဏျ ကို ခံစားရလို့ ကာ့ဒျလူမြိုးတှေ တူရကီနယျစပျကို အလုံးအရငျးနဲ့ ထှကျပွေး ကွတယျ။ (တကယျတော့ ဒီလိုဖွဈရတာလညျး အမရေိကနျနဲ့ မဟာမိတျ တှကေ ပငျလယျကှေ့ စဈပှဲကာလအပွီးမှာ ဆကျဒမျဟူစိနျကို ပုနျကနျဖို့ မွှောကျပေးတဲ့ အတိုငျး ထကွှမိလို့ ဖွဈရတာ။) ဒုက်ခသညျတှအေလုံးအရငျးနဲ့ မိမိရဲ့မဟာမိတျ တူရကီနိုငျငံထဲကို ဝငျလာရငျ မတညျမငွိမျဖွဈသှားမှာအမရေိကနျက စိုးရိမျတဲ့အတှကျ၊ တဈဘကျမှာ ဒုက်ခသညျ အဖွဈ နယျစပျဖွတျကြျောဝငျရောကျခှငျ့ကို ပိတျလိုကျပွီး နောကျတဈဖကျမှာ အီရတျပွညျတှငျးဘကျကို လူတှကေို မြှားချေါတဲ့အနနေဲ့ အတှငျးဘကျမှာ ကူညီ ကယျဆယျရေးပစ်စညျးတှေ ပေးဖို့စီစဉျပေးလိုကျတယျ။ ဒီတော့ လူတှဟော အန်တရယျ ကငျးရာနယျစပျဖကျကို ရောကျလာရမယျ့အစား အန်တရယျရှိတဲ့ ဧရိယာ နယျနမိတျ ထဲမှာပဲ ရှိနကွေတော့တယျ။
ဒီလိုဖွဈရပျတှကေို ဒီမှာ စာရငျးခနြရေငျ ပွောမဆုံးပေါငျ တောသုံးထောငျ ဖွဈသှား ပါလိမျ့မယျ။
ဖီအိုနာ တယျရီ ဆီကရတဲ့ ထူးခွားတဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးတဈခုကတော့ refugee-warrior ဆိုတဲ့အသုံးအနှုနျးဖွဈတယျ။ ဒုက်ခသညျစခနျးမှာ ဒုက်ခသညျအရခွေုံနထေိုငျပွီး လှုပျရှားနတေဲ့ တိုကျခိုကျရေးသမားတှကေို ဆိုလိုတယျ။
တရားဝငျအားဖွငျ့ပွောကွစတမျးဆိုရငျ လကျနကျရယျ တိုကျခိုကျခွငျးရယျ တို့ကို လုံးဝစှနျ့လှတျလိုကျမှသာ ဒုက်ခသညျအဖွဈ ခံယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျတှေ့ မှာ အဲသလိုဖွဈမနပေါဘူး။ လကျနကျမကိုငျခငျြယောငျဆောငျပွီး ဒုက်ခသညျစခနျးအရိပျ အောကျမှာ ခိုလှုံပွီး နောကျတဈကွိမျ သတျဖွတျတိုကျခိုကျမှုတှေ လုပျနိုငျအောငျ ကွံစညျနသေူတှဟော ဒုက်ခသညျ စခနျးတှမှော ရှိနတေတျ ပါတယျ။ ဒီလို လူမြိုးတှကေို လကျတှကှေ့ငျးထဲမှာ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ ဖီအိုနာ တယျရီ က ဒီလိုလူတှကေို အမညျသဈပေးပါတယျ။ ဒုက်ခသညျ-တိုကျခိုကျရေးသမားတှေ (refugee-warriors) လို့ချေါတယျ။
စဈရေးပါရဂူတှကေပွောတယျ။ စဈတိုကျတယျ ဆိုတာ ထောကျပို့ရေး (logistics) နဲ့ တိုကျတာတဲ့။ ဒီတော့ ခတျေသဈအကွမျးဖကျသမားတှဟော ထောကျပို့စနဈတှေ အကုနျလုံးပါဝငျတဲ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှကေို ဝငျခိုနကွေတော့တယျ။ ထောကျပို့စနဈ မလိုတော့ဘူးလေ။ တပျသားတှကေို ရိက်ခာပေးစရာမလိုဘူး၊ ဆေးကုပေးစရာ မလိုဘူး။ အလှနျကုနျကစြရိတျသကျသာစှာနဲ့ စဈတပျထောငျလို့ရတယျ။ အာဖရိကတိုကျမှာ ဒီလို ဖွဈရပျမြိုးတှရှေိခဲ့ဖူးတယျ။
မိမိတို့ ကူညီပေးမယျ့ လူဦးရထေုအတှကျ OIC လို (နိုငျငံတကာရဲ့ အကွမျးဖကျသမား အဓိပ်ပာယျသတျမှတျခကျြကို လကျမခံတဲ့) အဖှဲ့မြိုးက မဟာဗြူဟာခမြယျ။ ငှကွေေးခှဲဝခြေ ထားပေးတယျ။ AZG လို ပုလငျးတူ ဗူးဆို့ အဖှဲ့မြိုးက ဥရောပ တိုကျသား လူဖွူမကျြနှာဖုံးတှဖေုံးပွီး အဲသညျပိုကျဆံတှကေို လိုအပျတဲ့ နရော အရောကျ ပို့ပေးမယျ။ အဲသညျနရောမှာ အကူအညီပေးရေးအဖှဲ့ အနနေဲ့ နထေိုငျပွီး သူလြှိုလုပျမယျ။
ဒါမြိုးက သူတို့လုပျနကြေ အလုပျတှေ။
ကြှနျတျော လုပျတဲ့ အိမျစာ
AZG ဆိုတဲ့ အိမျစာကို တှကျခကျြကွညျ့ရငျ အောကျပါတို့ကို တှရှေိ့ပါတယျ။
AZG နဲ့ ပတျသကျလို့ စာရေးသူရဲ့ တှရှေိ့ခကျြတှေ သုံးသပျခကျြတှေ အကွံပွုခကျြတှေ ကို ဒီလို ခရြေးမိပါတယျ။
(၁) AZG ဝငျလာတယျ ဆိုကတညျးက သူတို့ရဲ့ ပဈမှတျအကြိုးခံစားခှငျ့ပေး လူဦးရထေု (target population) ဟာ (ရိုဟငျဂြာလို့ သူတို့ချေါတဲ့) နယျစပျဖွတျကြျော ဘင်ျဂါလီတှေ သာလြှငျ ဖွဈတယျ။
(၂) AZG ရဲ့ မွနျမာပွညျတှငျး အဓိကရညျမှနျးခကျြ (primary goal) က အဲသညျ ဘင်ျဂါလီတှေ အရေးအတှကျ ပွောဆိုရေးသားတိုကျပှဲဝငျဖို့ (advocacy) အတှကျသာ ဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ AZG ဟာ နိုငျငံရေးရညျမှနျးခကျြနဲ့ ဝငျရောကျလာတဲ့ iNGO ဖွဈတယျ။
(၃) ၂၀၁၀-ခုနှဈ စကျတငျဘာလ (၂၉)ရကျနမှေ့ာ အမရေိကနျ ကှနျဂရကျလှတျတျော အမတျ ခရစ်စတိုဖာ စမဈသျက ကှနျဂရကျကို တငျသှငျးတဲ့ ဘင်ျဂါလီတှကေို နိုငျငံသား ဖွဈခှငျ့အပွညျ့အဝပေးစရေေး ဆုံးဖွတျခကျြမူကွမျးကို တငျသှငျးရာမှာ MSF ရဲ့ ပွောဆိုခကျြ ကို ကိုးကားသှားခဲ့တယျ။ MSF က ဘင်ျဂါလီ(ရိုဟငျဂြာ)တှဟော မြိုးတုံးပြောကျကှယျလုနီးပါးဖွဈနတေဲ့ လူအုပျစု ဆယျမြိုးမှာ တဈမြိုးအပါအဝငျ လို့ ရေးသား ထားတယျ။ ဒီလိုမြိုး MSF (AZG ရဲ့ မိခငျအဖှဲ့) က ကမ်ဘာသိ လိုကျလံ ပွောကွား နတောဟာ မွနျမာပွညျတှငျးရေးကို အားမနာလြှာမကြိုး လိုကျလံစှကျဖကျ နတော ဖွဈတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခြာ အာဏာကို ထိပါးနတော သာလြှငျ ဖွဈတယျ။
(၄) AZG ဟာ သူတို့ရဲ့ ရုံးတှငျးစာတှမှော၊ မွနျမာပွညျပမှာ ပွောဆိုရေးသားရာမှာ နယျစပျကြျောကူး ဘင်ျဂါလီတှကေို ရိုဟငျဂြာ လို့ အမွဲတစေ ချေါဝျေါ သုံးစှဲတယျ။ ဒီလို တဈခါသုံးစှဲတိုငျး သုံးစှဲတိုငျးမှာ ရခိုငျမူမြိုးတှရေဲ့တညျရှိမှုကို ခွိမျးခွောကျမှုတဈခါစီ လုပျလိုကျတာဖွဈတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခြာပိုငျဆိုငျမှုကို စျောကားမှု တဈခါစီ လုပျလိုကျတာ ဖွဈတယျ။
(၄) AZG ဝနျထမျးဟောငျး ဦးကြျောလှအောငျအပါအဝငျ မူဆလငျဘာသာဝငျ ဘင်ျဂါလီတှကေ AZG ရဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေို လိုအပျသလို ခယျြလှယျနိုငျအောငျ ခှငျ့ပွု ထားတာဟာ မတျောတဆ ဖွဈရပျမဟုတျ။ တမငျသကျသကျ လုပျစခွေငျး ဖွဈတယျ။ AZG ရဲ့ အရငျအမွဈတှကေိုသုံး AZG ကားကို တဈဝီဝီ စီးပွီး စဈတှမှော သှားလာ လှုပျရှားနခေဲ့တဲ့ ဦးကြျောလှအောငျကို ပမာနှိုငျးမယျဆိုရငျ၊ ရဝမျဒါ ဒုက်ခသညျ စခနျးမှာ ထောကျပံ့ရေးအကူအညီလှိုငျးကို တကျစီးခဲ့ကွတဲ့ တိုကျခိုကျရေးသမားတှနေဲ့ အလားတူ နိုငျပါတယျ။
(၅) AZG ဟာ ဇှနျလ ဘင်ျဂါလီဆူပူမှုနဲ့ ဆကျစပျ ဖမျးဆီးခံရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဝနျထမျး ဦးကြျောလှအောငျ လှတျမွောကျရေးအတှကျ အားကွိုးမနျတကျဆောငျရှကျပွီး၊ သူ လှတျမွောကျလာတဲ့အခါ ကပျြငှေ (၄၉)သိနျး ခနျ့ ဆုခြီးမွှငျ့ပွီး အငွိမျးစားပေးကာ ရနျကုနျမှာထားရှိတယျ။ AZG အဖို့ရာ ဘင်ျဂါလီတိုကျခိုကျရေးသမားမြားဟာ ဆုခြီမွှငျ့ ရမယျ့ သူရဲကောငျး တှဖွေဈတယျ။
(၆) ဒေါကျတာအေးမောငျ ပွောသလို နိုငျငံတကာက လူသားခငျြးစာနာမှု အကူအညီ ပေးခငျြရငျ မွနျမာအစိုးရ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရကတဈဆငျ့ပေးပါ။ မှနျပါတယျ။ ဒါ့တငျလား ဆိုတော့ ဒါနဲ့တငျ မလုံလောကျသေးပါဘူး။ သကျဆိုငျရာ လူ့အသိုကျအဝနျး က စောငျ့ကွညျ့ပွီး community watch လုပျရမယျ။ အလုပျလုပျကွတဲ့ NGO တှသောမက သကျဆိုငျရာအာဏာပိုငျတှကေိုလညျး transparency ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု ရှိရှိ အလုပျလုပျခိုငျးရပါမယျ။
(၇) ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ညံ့ဖငျြးပုံကို လြှောကျပွောနရေငျ အမုနျးပှားရုံပဲ ရှိမယျ။ စာရငျးကိုငျဘယျသူကို ရခိုငျဝနျကွီးဘယျသူက ငှစောရငျးလေး အဆငျခြောအောငျ ရေးပေးဖို့ ပိုကျဆံဘယျနှဈသိနျး မုနျ့ဖိုးပေးလိုကျတယျ ဆိုတာကအစ ကွားတဲ့လူက ကွားဖူးပွီးသား။ ဒီတော့ ထောကျပံ့ကူညီရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကွီးကွပျဆောငျရှကျမှုတှေ ကို ရပျရှာစောငျ့ကွညျ့သူတှေ အမွဲသိနနေိုငျအောငျ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု (transparency) ရှိရှိ လုပျဆောငျပေးရပါမယျ။ ဒါမှမဟုတျရငျ သဲခြောငျးဘင်ျဂါလီစခနျး ဟာ အနုမွူ စကျရုံတှနေဲ့ တကှ ဖွဈသှားတာကို နပွေညျတျောကို တာဝေးပဈ ဒုံးကညျြထိမှ သိရတယျ ဆိုတာမြိုး ဖွဈသှားကုနျနိုငျတယျ။
(၈) ရခိုငျတှအေတှကျ ရညျရှယျပါတယျတဲ့ ဆိုတဲ့ “ရှုခငျးသာ” ဆေးခနျးကို စဈတှမွေို့ခံတှေ ကနျ့ကှကျလို့ မဖှငျ့လိုကျရဘူး။ ဒါပမေဲ့ AZG က တောငျးဆိုလို့ ဆိုပွီး ဆောကျပေးနတေဲ့ ဘင်ျဂါလီတှေ အတှကျ ဆေးခနျးနှဈခနျး ရှိသေးတယျ။ ဒီနရောတှေ မှာ လညျး AZG ရဲ့ ပါဝငျ ပတျသကျ နမှေုကို ဖယျရှားပဈရပါမယျ။
(၉) ဒါတှကေို ဆောကျဖို့လိုအပျငှကေို ဒုက်ခသညျ ကယျဆယျရေးရံပုံငှကေ ထုတျပေး တာလို့ သိရတယျ။ ပွညျနယျကနျြးမာရေးဌာနက ထုတျယူသုံးစှဲထားတဲ့ ကပျြငှေ (၁၅၃)သိနျးခနျ့မှာ သိနျးတဈရာဖိုးကိုပဲ စာရငျးပွရသေးတယျလို့သိရတယျ။
(၁၀) AZG ရဲ့လုပျရပျတှဟော ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံတျောကို အကွိမျကွိမျ ထိပါးတိုကျခိုကျခဲ့တယျ။ ထိပါးတိုကျခိုကျသူတှကေိုလညျး ပုံအော အကူအညီပေးခဲ့ တယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ AZG ကို မွနျမာပွညျထဲမှာ လုံးဝမထားပဲ ဖယျထုတျပဈသငျ့တယျ။ ဒီလိုဖယျထုတျရာမှာ AZG လုပျနတေဲ့ မွနျမာ တိုငျးရငျးသား တှအေတှကျ လုပျပေးနေ တဲ့ အရောငျပွစီမံကိနျး (alibi project) တှကေို တိုငျးရငျးသား အဖှဲ့အစညျး တှေ လကျလှဲလုပျနိုငျအောငျ စီစဉျသငျ့တယျ။
(၁၁) AZG ကို ဖယျရှားရုံမြှမက ရှကေ့ပွောခဲ့သလို AZG ရဲ့ foot-in-the-door နညျးစနဈနဲ့ မိတျဖှဲ့ထားတဲ့ သူတှဟော ဘယျသူတှလေဲ ဆိုတာကို သိအောငျ ဖျောထုတျရပါမယျ။ အဲဒီလူတှဟော ဘယျသူတှလေဲ။ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးတှထေဲက ဘယျသူတှေ ရှိသလဲ။ အနောကျပိုငျးတိုငျး စဈတိုငျးမှူးရော ပါသေးလား၊ ရခိုငျ ဝနျကွီးခြုပျကော ဘယျလိုလဲ၊ ကနျြမာရေး ရခိုငျပွညျနယျမှူးလား၊ ရခိုငျပွညျနယျ လူမှုရေးဝနျကွီးလား။ အစရှိသဖွငျ့ ဒီလိုမြိုး စိစဈပွီး AZG ရောဂါဝငျနတေဲ့ သစ်စာဖောကျ ကို ရှာဖှဖေျောထုတျသငျ့တယျ။
A သုံးလုံးကိုရှောငျ အိုတောငျ မဆငျးရဲ
‘ကုလား’ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လူမြိုးရေးခှဲခွားတဲ့အသုံးအနှုနျးဖွဈတဲ့အတှကျ မိမိတို့ ရုံးတှမှော ပွောဆို သုံးစှဲခွငျးမပွုရဆိုပွီး AZG တို့ ACF တို့ AMIတို့လို ကုလားဝငျစား NGO တှကေ သတျမှတျထားတာ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာပါပွီ။ သူတို့ ရုံးတှထေဲမှာ ကုလားထိုငျကို ဘယျလိုချေါရမှနျး မသိတော့ပါဘူးလို့ ရယျသှမျးသှေးရတာ ကွာပါပွီ။ မွနျမာပွညျမဖကျကလူတှကေတော့ ဒီလို ‘ကုလား ဟု မချေါရ’ ပညတျကို ကွားဖူးတာ လပိုငျးလောကျပဲ ရှိပါသေးတယျ။
ဘင်ျဂါလီကုလားရှာတှကေလှဲလို့ ရှာနီးခြုပျစပျက ရခိုငျ ဗမာ တိုငျးရငျးသားရှာတှကေို ဆနျတဈစိမှ မရောကျစရေအောငျ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွံဖနျဆောငျရှကျတာမြိုးအပွငျ၊ ‘ကူညီထောကျပံ့ရေး’ အားဖွငျ့ ပကျြစီးစခေဲ့တာ အမြားကွီးပါပဲ။ ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေး နယျပယျအသီးသီးမှာ ပကျြစီးစခေဲ့တယျ။
ဘင်ျဂါလီ တီဘီရောဂါသညျတှကေို AZG က နှဈတှေ ဆယျခြီပွီး ကုသပေးလာတာ ရောဂါသညျ ဦးရဟော လြော့ကမြလာပဲ တိုးတိုးလာတယျလို့ ဆိုတယျ။ (တီဘီ ရောဂါရှိသူနဲ့မိသားစုကို ထောကျပံ့တဲ့ ပမာဏက မကျရောကျစရာ ဆိုတော့ ကုလားတှေ ကိုယျတိုငျ ရောဂါမကူး ကူးအောငျလုပျနကွေတယျ လို့ဆိုတယျ။) ဒီလို တိုးလာတာကိုလညျး အကွောငျးရငျးမရှာပဲ ထောကျပံ့တဲ့ အလှူရှငျ ဆိုသူတှကေ ဘာကွောငျ့ထောကျပံ့နကွေသလဲ။
ဘင်ျဂါလီတှနေတေဲ့ ကြေးရှာတှကေို ခေါငျးစဉျအမြိုးမြိုးတပျပွီး ဆနျတှေ အလြှံပယျ ထောကျပံ့နလေတေော့ ဆနျစြေးကတြယျ။ ဒီတော့ ကုလားလယျသမားတှေ နဈနာတယျ။ လယျစိုကျမယျ့အစား တီဘီရောဂါသညျ ထောကျပံ့ကွေးယူနတောကမှ တှကျခကြေိုကျဦးမယျ ဆိုတဲ့ တှကျကွေးတှဖွေဈလာတယျ။
လယျသမားတှေ တောငျသူတှအေတှကျ ပိုးသတျဆေးတှကေို အရမျးကာရော စနဈမရှိ ဖွနျ့ဖွူးခဲ့တာတှကွေောငျ့ ဂဟေစနဈတှေ ပကျြစီးကနျြခဲ့တာမြိုးရှိတယျ။
ဒီတော့ ကောငျးဖို့အတှကျ လုပျတာကောငျးရမှာပေါ့ ဆိုပွီး လူသားခငျြးစာနာတဲ့ အကူအညီ (humanitarian aids) တှဟော ကောငျးကြိုးကို အမွဲတမျးဖွဈစတေယျ လို့ ဆိုကွတာဟာ မမှနျပါဘူး လို့ ဖီအိုနာ တယျရီ က ပွောတာဟာ အမှနျပဲဖွဈပါတယျ။ အဲသညျ အကူအညီတှကေ ဆိုးကြိုးမဖွဈစနေိုငျဘူး (do no harm) ဆိုတာ လကျတှမှေ့ာ ဘယျတော့မှ မဖွဈနိုငျဘူး လို့ သူမက အခိုငျအမာ ဆိုတယျ။ လူသားခငျြးစာနာတဲ့ အကူအညီ (humanitarian aids) တှမှော ဘေးထှကျဆိုးကြိုး (side effect) တှေ အမွဲတမျးရှိတယျ လို့ သူမက ဆိုပါတယျ။
AZG ရဲ့ သရုပျသကနျ အမှနျ ကို ဆနျးစဈ အံထုတျခွငျး (အပိုငျး နှဈ)
by Coral Arakan News Agency on Monday, October 22, 2012 at 1:08am •
AZG ရဲ့ သရုပျသကနျ အမှနျ ကို ဆနျးစဈ အံထုတျခွငျး (အပိုငျး တဈ) မှ အဆကျ
လှတဲ့ ခဈြနဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့ ဇာတျလမျး၊ လှမျးခနျးကို ရောကျခဲ့
ကိုငွိမျးမောငျက ဒီနေ့ (အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျနေ့) မှနျးလှဲမှာ ခဏတှခေ့ငျြတယျ ဆိုလို့ သူနဲ့သူ့မိတျဆှေ နှဈယောကျကို ခြိနျးတှပေ့ါတယျ။ မနကျဖွနျကရြငျ ရနျကုနျမှာ HIV ဝဒေနာရှငျတှကေို အကူအညီပေးနတေဲ့ အဖှဲ့တှဖွေဈတဲ့ Pheonix Association ရယျ၊ MPG (Myanmar Positive Group) ရယျ၊ 3N Network ရယျ တှပွေီ့း စဈတှကေ ဝဒေနာရှငျတှကေို ဘယျလိုဆကျလကျ လကျလှဲယူကွရယျ့အကွောငျးကို ဆှေးနှေးကွမယျ့ သဘောကို ကွားရတယျ။
နောကျထပျပွညျတှငျးအဖှဲ့တဈဖှဲ့က စဈတှဝေဒေနာရှငျတှကေို စဈတှမှော တာဝနျမယူနိုငျသေးတဲ့ ကွားကာလမှာ AZG ဆရာဝနျတဈယောကျ ဦးဆောငျပွီး ကိုငွိမျးမောငျတို့ ရုံးခွံဝငျးလေးမှာ ဆေးပေးဖို့ စီစဉျထားတယျ လို့ဆိုပါတယျ။ AZG ဆရာဝနျတှလေညျး စဈတှမှော တဈယောကျပဲ ကနျြတော့တယျ လို့ဆိုတယျ။ AZG ဆရာဝနျတှေ နှဈသုတျခှဲပွီး ရနျကုနျကို တကျသုတျနှငျကုနျကွပွီ။
ကိုငွိမျးမောငျတို့ မိတျဆှတှေေ အဆငျပွကွေမှာမို့လို့ ကြှနျတျော ဝမျးသာပါတယျ။ သဈမရခငျ ၀ါးပေါငျးကှပျ တဲ့သဘော ဆိုရငျတော့ ကောငျးပါတယျ လို့ ကြှနျတျော ဖွပေါတယျ။ မွို့က လူတှေ လညျး အနှောငျ့အယှကျ မပေးလောကျဘူးထငျပါတယျ လို့ ကြှနျတျော ဖွခေဲ့တယျ။ ဒါက လှဲလို့ တခွား ဘာ ပရိုဂရမျတှေ၊ ပရောဂကျြတှေ မလုပျဖို့ တော့အရေးကွီးတယျ လို့ ကြှနျတျောတို့ ပွောကွတယျ။
သူတို့ကို နှုတျဆကျခဲ့ပွီး ထှကျအလာမှာ ဖုနျးတဈကော လာတယျ။ မနကျဖနျ ဆယျနာရီမှာ ပွညျနယျ ရဲမငျးကွီးက အစညျးအဝေး ဖိတျထားလို့ လာခဲ့ပါဦးတဲ့။ မွို့နယျ တရားသူကွီးအပါအဝငျ နောကျထပျ ခုနဈယောကျလောကျကို ဖိတျထားပါတယျ တဲ့။
ဆန်ဒပွပှဲတိုငျးလိုလိုမှာ ပါနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ပွညျနယျရဲမငျးကွီးရုံးခနျးမှာ လုပျမယျ့ အစညျးအဝေးကို ဖိတျတယျဆိုတော့ ကြှနျတျော အူကွောငျကွောငျ ဖွဈသှားတယျ။ မွို့နယျ တရားသူကွီးပါ ပါဦးမယျဆိုတော့ ကြှနျတျော ကြောခမျြးသှားတယျ။ ရိုးရိုး သားသား လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ လို့ ကြှနျတျော ဖွသေိမျ့တှေးလိုကျတယျ။
ကဲ . . . လှမျးခနျးကို ရောကျပါပွီ။ အဖမျးမခံရသေးရငျ စာဆကျရေးပါဦးမယျ။
*ကိုငွိမျးမောငျ၏ နာမညျကို ပွောငျးလဲရေးသားထားပါသညျ။
ကိုငြိမ်းမောင်* တစ်ယောက် အသစ်စက်စက်ဖွင့်တော့မယ့် AZG ရဲ့ “ရှုခင်းသာ” ဆေးခန်းကိုလာဖို့ ဖိတ်စာရထားတဲ့အတိုင်း၊ မနက် ကိုး နာရီလောက်မှာ ဆေးခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါ မနေ့ကအထိ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ ဖွင့်ပွဲအရေးအတွက်ပြင်ဆင်ရင်း စည်ကားနေခဲ့တဲ့ နှစ်ထပ် တိုက်အိမ်ကလေးဟာ သော့ခတ်ပိတ်လျက်သားဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ တိုက်ရဲ့ဝင်ဝအုတ်တိုင်မှာ အေသရီးဆိုဒ်စာရွက်တစ် ရွက် ကပ်ထားတယ်။ စာရွက်မှာရေးထားတာက “ဘက်လိုက်မှုရှိ၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုမရှိ၊ ကုလား (ဘင်္ဂါလီ) အရေး ဆောင်ရွက်ပေးသော AZG (MSF) အား အလိုမရှိ” လို့ ရေးထားတယ်။
နောက်ထပ် ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ လူလေးငါးခြောက်ယောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာပြီး တိုက်ရှေ့မှာရပ်နေတယ်။ ခဏနေတော့ အမျိုးသားတွေ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အရှိုရှိုရောက်လာကြတာ လူအယောက်နှစ်ဆယ် သုံးဆယ်လောက်ဖြစ်လာတယ်။ လူစုလူဝေးကြီးထွားလာပြီး နောက်ထပ်ငါးမိနစ်လောက်အကြာမှာ AZG ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းရေးထားတဲ့ ဗီနိုင်းတွေကို ဖြန့် ကိုင်ပြီး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံကြတယ်။ ပရိတ်သတ်က လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးကြပြီးတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ လူစုခွဲလိုက်ကြတယ်။
ဆန္ဒပြကြမယ့်နေရာကို အစောဆုံးရောက်လာတဲ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်ကို သတင်းဌာနတစ်ခုက ကင်မရာကိုဒေါက်တိုင်ပေါ်တင်ပြီး အကျအန အင်တာဗျူးနေတာကို ကိုငြိမ်းမောင်တွေ့ခဲ့သေးတယ်။ တွေးစရာတွေ၊ စိတ်ပူစရာတွေအပုံအပင်နဲ့ ကိုငြိမ်းမောင်တစ်ယောက် သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ရုံးရှိရာခြံလေးကို ပြန်လာခဲ့တယ်။
ကိုငြိမ်းမောင်တို့ အဖွဲ့ကို Utopia လို့ခေါ်ပါတယ်။ Utopia ဟာ စစ်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က PLHIV (People Living with HIV ၊၀ါ၊ HIV ဝေဒနာရှင်) တွေကို တတ်အားသမျှ အကူအညီတွေပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကလေးဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုငြိမ်းမောင် ကိုယ်တိုင် ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲအပြီး မဖွင့်လိုက်ရတဲ့ AZG ဆေးခန်းရှေ့မှာ အင်တာဗျူးနေတဲ့လူကတော့ ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သာမန်စစ် တွေမြို့သားတစ်ဦး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ activist တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တော့ ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်ခင်တစ်ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်က ကိုငြိမ်းမောင်ကိုတွေ့ချင်တဲ့အတွက် ကြားလူတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပေးပါသေးတယ်။ ကိုငြိမ်းမောင်အနေနဲ့ တကယ် မအားမလပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်နဲ့ အဲသည်နေ့က မတွေ့လိုက်ရပါဘူး။ AZG ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ကိစ္စနဲ့ ကိုငြိမ်းမောင်တစ်ယောက် မ အားမလပ် ဖြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆန္ဒပြကြတာပြီးသွားလို့ မွန်းလွဲတစ်နာရီလောက်မှာ ကိုငြိမ်းမောင်က ကျွန်တော်ဆီကိုဖုံးဆက်ပါတယ်။ မနေ့က ဆောရီးပါဗျာတဲ့။ ဒီနေ့ အားသလား၊ အခုအားသလားတဲ့။ သူချိန်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ Utopia ရုံးခြံလေးဆီကို ကျွန်တော် ချက်ချင်းဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ လိုက်သွားပါတယ်။
“ခင်ဗျား အင်တာဗျူးလုပ်နေတာကို မနက်က ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သေးတယ်” လို့ သူက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ပြောပါတယ်။
အဲ . . . ထူးဆန်းတာတစ်ခုက၊ AZG ဆေးခန်းကပေးတဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ အသက်ဆက်နေရတဲ့လူတစ်ယောက်ကို AZG ဆေးခန်းမဖွင့်ရအောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာပါတဲ့ လူတစ်ယောက်က လာတွေ့ရတာ သိပ်ပြီးကြောင်တက်တက် ဖြစ်မနေပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AZG ကို ရခိုင်လူထုက တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆန့်ကျင်တော့မှာကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး သိနေပြီးသားဖြစ်ကြလို့ပါပဲ။
“ဒါကတော့ဗျာ . . . ၊ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးအရေးကို ကျွန်တော်တို့ PLHIV အယောက် သုံးရာလောက်အရေးနဲ့ ဘယ်လိုမှလဲလို့မှမရတာ။ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်” လို့ သူကဆိုရှာတယ်။
သူတို့ Utopia အဖွဲ့အကြောင်းကိုမေးနေစဉ်မှာပဲ လူနှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ မယောင်မလယ်လုပ်နေရင်း၊ ခဏနေတော့ ခြံထဲကို ၀င်လာတယ်။ သူတို့ကပြောတယ်။ ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်အတွက် ART လိုနေတဲ့အတွက် ဆေးဖြန့်ပေးတဲ့ outreach worker ၀န်ထမ်းကို ဖုံးဆက်တာ ဖုံးပိတ်ထားတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးတဲ့။
“အေးဗျာ၊ ဆေးတွေက အခုပိတ်ထားတဲ့ဆေးခန်းထဲမှာဗျ။ နားလည်ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းကထုတ်ပေးမှ ရမယ်” လို့ ကိုငြိမ်းမောင်က ရှင်း ပြတယ်။
စောစောပိုင်းက MSM (Men who have Sex with Men) နှစ်ယောက်ဟာ AZG က နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီး ဒေါက်တာအယ်လဆာကို သွားတွေ့ပြီး ဆေးထုတ်ပေးဖို့ သွားတောင်းသေးတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရှေ့က ကိုလူစိမ်းနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကပြောပြတယ်။ အဲသည် နိုင်ငံခြားသူ ဒေါက်တာမမက ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ ငါရော အခြားဒေသခံဝန်ထမ်းတွေပါ ဆေးခန်းကိုသွားပြီး ဆေးမထုတ်ပေးရဲဘူး၊ အသက်အန္တရာယ်ရောက်မှာကို စိုးရိမ်တယ်တဲ့။ နင်တို့ဆေးလိုချင်ရင် ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေဆီက သွားတောင်းပါတဲ့။ ငါတို့တော့ မပေးနိုင်ဘူး လို့ ပြောတယ်တဲ့။
ကိုယ်မဲမရတဲ့ရပ်ကွက်ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်တစ်ယောက်က မလိုတမာလေသံနဲ့ ပြောပုံနဲ့တူလိုက်တာလို့ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။
ကိုလူစိမ်းနှစ်ယောက်က မှတ်ချက်တစ်ခုပေးတယ်။ AZG က ဒီလောက်တောင် ဘင်္ဂါလီဘက်ကိုလိုက်နေတာ။ ဒီလိုဖြစ်လာမှာကို တားလို့ မရဘူးဗျလို့ သူတို့ကဆိုတယ်။
အဲသည် လူနှစ်ယောက်ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကျမှ ကိုငြိမ်းမောင်က ကျွန်တော့်ကို လေးနက်စိုးရိမ်တဲ့မျက်နှာနဲ့မေးတယ်။ အေးဗျာ၊ ဘယ် လို လုပ်ရမလဲမသိဘူး၊ ရန်ကုန်မှာလိုလည်း ဆေးဆိုင်တွေက၀ယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကိုငြိမ်းမောင်ကညဉ်းတော့၊ ကျွန်တော့် အသိ တစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးကြည့်ရတယ်။
လောလောဆယ်ကတော့ စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက ကာလသားရောဂါဌာနကိုသွားပါတဲ့။ ART ဆေးတွေကိုတော့ အထွေထွေရောဂါကု သမားတော်ကြီးက ကိုင်ထားတယ်တဲ့။ သူတို့ရဲ့စနစ် ပရိုဆီဂျာလေးကိုဖြတ်သန်းပြီးရင် ဆေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။ အဖြေတစ်ခု ထွက် လာတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါက လတ်တလောဖြေရှင်းဖို့ ထွက်ပေါက်တစ်သွယ်လို့ပဲ ယူဆရတယ်။ AZG ကလုပ်နေခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းနေရာကို ၀င်ယူဖို့၊ တာဝန် ၀င်ရောက်ထမ်းဆောင်ဖို့၊ AZG လိုပဲ ရံပုံငွေကိုလက်ခံယူဖို့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လိုလာလိမ့်မယ်။ စစ်တွေက ရွှေဂရုဏာဆေးခန်းလို ဆရာ ၀န်တွေဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကတော့ဖြင့် အဲသည်စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ပြီး နေရာဝင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ရတယ်။
ဒါအတွက် Pheonix တို့၊ Myanmar Positive Group (MPG) တို့၊ 3N Network တို့က AZG ရဲ့ HIV ဆေးပေးပရိုဂရမ်ကို ဆက်ခံတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်မလဲ၊ ဘယ်သူတွေကများ ဒီအတွက် ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးမလဲ . . . စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာကျန်သေးတယ်။
• ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် ဂေါက်ရိုက်ကြသူများ
AZG (ခေါ်) MSF-Holland ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ၀င်လာရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာ သူတို့အခေါ် ရိုဟင်ဂျာ ကျွန်တော်တို့အခေါ် ဘင်္ဂါ လီတွေအတွက် အန္တိမရည်မှန်းချက်ထားပြီးဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် ရည်မှန်းချက်နဲ့ မြန်မာပြည်ကိုသွားစေဖို့ အလှူရှင်တွေရဲ့ ငွေ အားမောင်းနှင်မှုနဲ့ ဒီကိုရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
MSF အပိုင်းအသီးသီးတို့ရဲ့ မြန်မာပြည်ကိုဝင်ရောက်လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအသေးစိတ်ကို MSF ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာပဲ ရေးတင်ထားတဲ့ ဒေါက် တာ ဖီယိုနာတယ်ရီ (Dr Fiona Terry) ရေးသားတဲ့ Myanmar. “Golfing with the Generals” ဆောင်းပါးမှာ တိတိကျကျ သရုပ်မှန်ကို သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြည့်ရင် alibi project (မျက်နှာဖုံး ရုပ်ပြစီမံကိန်း) အစရှိတဲ့ ထူးဆန်းသောဝေါဟာရ အသစ် အဆန်းတွေ တွေ့ရပြီးသကာလ ရေနံငွေကို နောက်ခံပြုထားတဲ့ NGO တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတများစွာတိုးပွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကိုဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ MSF ရဲ့ အပိုင်းခွဲ သုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ MSF-France၊ MSF-Switzerland နဲ့ MSF-Holland တို့အ နက်မှာ ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိစပ်အလုပ်လုပ်တာက MSF-France အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ MSF-France ဟာ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တောက် လျှောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်မလာပဲ ၁၉၈၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာ ပြည်ထဲကိုဝင်လာဖို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လျှောက်ထားတဲ့အခါ အောက်ပိုင်းဗျူရိုကရက်တွေက ထောက်ခံပေးလိုက်ပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ က စိစစ်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်တဲ့အခါကျတာ့၊ ထိုင်းနယ်စပ် အကူအညီပေးရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေ KNU နဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေကြောင့် ပယ်ချခြင်းခံရတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ MSF-Holland က (ဘင်္ဂါလီ) ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ၀င်ရောက်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ သတိကြီးစွာထားပြီးလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ MSF-France နဲ့ သူတို့ကို ဆက်စပ်မမြင် မိအောင် MSF-Holland ဆိုတဲ့ သူတို့နာမည်အရင်းမသုံးပဲ သူတို့ရဲ့ ဒတ်ခ်ျဘာသာ နာမည် AZG (Artsen zonder Grenzen) ကိုခံယူပါတယ်။ MSF ကိုမသုံးပဲ AZG ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးတာကြောင့် MSF အသိုက်အ၀န်းရဲ့ မျက်ခုံးပင့်ကြည့်မှုကို ခံရသော်ငြားလည်း ဒီလိုမျက်နှာ ဖုံးစွပ် လုပ်ရပ်ကြောင့် အောင်မြင်သွားပါတယ်။ AZG လို့ပဲခေါ်ခေါ် MSF-Holland လို့ပဲခေါ်ခေါ် သူတို့အဖွဲ့ဟာ မြန်မာပြည်ထဲကို အောင်အောင် မြင်မြင်ဝင်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ ရုံးစိုက်အခြေချမယ့် AZG ရဲ့ ပထမဆုံး တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တော် ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဟာ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဇွန်န၀ါရီလမှာ ရန်ကုန်မြို့ကို ဆိုက်ရောက်တော်မူပါတယ်။
UNICEF ရဲ့ ကမကထပြုမှုအားဖြင့် လုပ်ငန်းတွေကို စတင်ချိတ်ဆက်တယ်။ UNICEF နဲ့ အဆောက်အအုံ တစ်ခုတည်းမှာ ရုံးခန်းဖွင့်တယ်။ ကျုပ်တို့ရွာမှာ အရင်ရောက်နှင့်နေတဲ့ UNICEF ကတော့ AZG ကို ရွာကာလသားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီး လမ်းကြောင်းရှင်း ပေးတယ် လို့ပဲ ဆိုပါတော့။
AZG က အကွက်ကျကျ ခြေလှမ်းတွေလှမ်းလာပုံကို ဒေါက်တာဖီအိုနာတယ်ရီက ဒီလို ရေးထားတယ်။
AZG ရဲ့ အဓိကအာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ အရေးအရာက ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) တွေရဲ့အရေးဖြစ်ပေမယ့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကို AZG ကို သွားလာဆက်သွယ်ခွင့်ပေးဖို့ကို အစိုးရက စိတ်ကူးထဲမှာတောင် ထည့်မထားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ရန်ကုန်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာ ဆေးခန်းတစ်ခန်းဖွင့်တဲ့ ခြေလှမ်းကို “မဟာဗျူဟာမြောက်” ခြေလှမ်းအနေနဲ့ စတင်လှမ်းလိုက်ပါတယ်တဲ့။
ဒါဟာ သူတို့အခေါ် “foot-in-the-door” လို့ခေါ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာအရာရှိများနဲ့ ချစ်ကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး ခြေလှမ်းမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါက မှတစ်ဆင့် အရာရှိကြီးတွေနဲ့ ဂေါက်ရိုက်တာတို့၊ အရာရှိကြီးတွေကို လက်ဆောင်ပေးတာ မိတ်ဆွေဖွဲ့တာတို့လုပ်ပြီး မိမိတို့သွားချင်တဲ့ နေရာဆီ တဖြည်းဖြည်းရောက်အောင် သွားနိုင်မှာမို့လို့ဖြစ်တယ်။
တစ်ခါတော့ AZG ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူဟာ ကချင်ပြည်နယ်ထဲက ကျောက်တူးကြတဲ့ နေရာတစ်နေရာ (ဖားကန့်လား ဘာလားတော့မသိ)မှာ ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့အရေးကို ပြောချင်တဲ့အတွက် ကချင်စစ်တိုင်းမှူးကို တွေ့ခွင့်တောင်းတာ တွေ့ခွင့်မရ ဖြစ်နေပါသတဲ့။ နောက်ဆုံးမတော့ မြစ်ကြီးနားဂေါက်ကလပ်ကို သွားပြီးဂေါက်ရိုက်လိုက်တာ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလေရောတဲ့။ ဒါက သူတို့သုံးနေကျ foot-in-the-door diplomacy။ ချဉ်းကပ်ရင်းနှီးမှုရအောင်လုပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တာရအောင်ယူသွားတာ။
ဒါအပြင် AZG က သုံးတဲ့ နောက်ထပ်နည်းတစ်နည်းကို Medical diplomacy လို့ ခေါ်ရမယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဆေးပညာပိုင်းအရ မိမိတိုရဲ့ အသုံးတည့်မှုကို ချသုံးပြီး လိုချင်တဲ့နေရာကို ရောက်အောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ငှက်ဖျားဆေးယဉ်သွားတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ AZG ဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ရခိုင် ဒေသမှာ လေ့လာမှုတစ်ရပ်လုပ်တယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ မှာသုံးနေတဲ့ ငှက်ဖျားဆေးပေးစနစ်ရဲ့ ရခိုင်ဒေသမှာ ဆေးမတိုးဖြစ်နေပုံကို ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့အတူ AZG ရဲ့ လုပ်ရေးလုပ်ခွင် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် တိုးတက်လာခဲ့တယ်။ ဒါမျိုးကျတော့ medical diplomacy လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ရခိုင်နယ်စပ်က ဘင်္ဂလီတွေဟာ သူတိုအဖို့ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးရမယ့် ပင်မလူဦးရေထု (target population) ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဘယ် တော့မှမမေ့တဲ့ AZG အတွက် သူတို့အရမ်းသွားချင်လှတဲ့ ရခိုင်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းက ၁၉၉၃ ဧပြီလမှာ ပေါ်လာ ပါတယ်။ ငှက်ဖျားရောဂါ ပရိုဂရမ်တွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ AZG ဟာ စစ်တွေမြို့မှာ ရုံးဖွင့်ခွင့်ရတယ်။
ဒီလိုတစ်ရွေ့ရွေ့တိုးသွားရင်းနဲ့ နောက်ထပ် လေးနှစ်ကျော်အကြာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇွန်န၀ါရီလမှာ ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ ပြည့်လျှံနေတဲ့ မောင်တော မြို့မှာ AZG ရုံးဖွင့်ခွင့်ရပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ မဟာရည်မှန်းချက်ကြီးတွေထဲက တစ်ရပ် အောင်မြင်သွားပါတယ်။
မိမိတို့ AZG ရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာ ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ)တွေအတွက် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ (AZG’s primary goal of advocacy on behalf of the Rohingyas) ဆိုတဲ့ AZG အဖွဲ့သားများအတွက် မဟာခြေလှမ်းကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။
မိမိတို့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ နယ်မြေထဲမှာ လက်တွေကျကျ တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းသွားပြီး ဆေးဖက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရင်း ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) အရေးအတွက် တစ်ဆင့်ချင်း အုတ်မြစ်ချသွားလိုတဲ့ ရန်ကုန်က AZG ရုံးအုပ်ချုပ်သူများရဲ့ ချီတက်နှုန်းကို နှေးကွေးလှ တယ်ဆိုပြီး၊ ဟော်လန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်မြို့ရုံးချုပ်က လူကြီးမင်းတွေက မကျနပ်နိုင်ကြတာတွေ ခဏခဏ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ AZG ရဲ့ အတွင်းလူတွေကဆိုပါတယ်။
ဒီလို မကျေနပ်နိုင်တာတာ အထူးသဖြင့် အလှူရှင် donors တွေနဲ့ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပြီးတိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။
မြန်မာပြည် မောင်တောနယ်စပ်က ဘင်္ဂါလီကုလားအရေးကိုဆောင်ရွက်တာ နှေးကွေးလှတယ်ဆိုပြီး ဒေါသထွက်ရလောက်အောင် အမ်စ တာဒမ် AZG လူကြီးမင်းများနဲ့ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးကြသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေများပါလိမ့်။
အင်္ကျီရှည် ၀တ်ရုံဖြူကြီးတကားကားနဲ့ ခေါင်းခြုံဘောင်းရစ်အကျအနနဲ့ အာရပ်ရေနံနိုင်ငံတွေက အာရပ်ကြီးတွေများလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ က ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လွှတ်လိုက်တဲ့ ဦးဟန်ညောင်ဝေလိုလူတွေလား။
ဒီလို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီဆိုတာတွေကို အသုံးချပြီး၊ လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးရလဒ်ထွက်လာအောင် မိမိတို့အားပေး နေတဲ့အုပ်စု အင်အားကြီးသထက်ကြီးလာအောင် ပုံဖော်လုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို အဲဒီအာရပ်ကြီးတွေလည်း သိတယ်၊ ဦးဟန်ညောင် ဝေလည်းသိတယ်။ AZG က လူ့အခွင့်အရေး အရေခြုံတွေကလည်းသိတယ်။ ကျွန်တော်လည်းသိတယ်။ ဖီအိုနာ တယ်ရီလည်းသိတယ်။
ဒါတွေကို အတွင်းကျကျ အသေအချာသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အဓိကနဲ့ဘွဲ့ရပြီး MSF မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ဖူး တဲ့၊ ကမ္ဘာအနှံ့က သွေးမြေကျ ပဋိပက္ခတွေကြားမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့၊ ထောက်ပံရေး အကူအညီတွေဟာ အုပ်စုဘက်ပြိုင် မှုတွေကို သြဇာသက်ရောက်မှုရှိတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ကို ခရေစေ့တွင်းကျ စာတတန်ပေတဖွဲ့ ရေးသားဖူးတဲ့ ဖီအိုနာတယ်ရီ (Fiona Terry) ဖြစ်ပါတယ်။
သူ ဘာပြောသလဲဆိုတာကို ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါတယ်။
လူသားစာနာကူညီထောက်ပံ့မှု ရဲ့ နိုင်ငံရေး (politics of humanitarian aids)
NGO အရေးဟာ နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ရင် မရယ်ရင်တောင်မှ ပြုံးတုံ့တုံ့ လုပ်မိကြမယ့်သူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မရယ်ကြပါနဲ့။
ပဋိပက္ခနယ်မြေအတွင်းက လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေဟာ ဖက်ပြိုင်နေကြတဲ့ အုပ်စုတွေ ရဲ့ချိန်ခွင်လျှာကို လိုသလို ချိန်ညှိပေးလို့ရတယ်။ တစ်ဖက်ကို အင်အားပိုကြီးစေပြီးတော့ တစ်ဘက်ကို အင်အားချိနဲ့သွားစေတယ်။
တစ်ချိန်ကျရင် အဲသည် အင်အားကြီးလာတဲ့ဘက်က အင်အားချိနဲ့နေတဲ့ဘက်ကို မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်တာမျိုးဖြစ်လာရင် တကယ်သတ်တဲ့လူတွေရဲ့လက်မှာ သွေးစွန်းရုံမက ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးတဲ့ အထောက်ပံ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ လက်မှာလည်း သွေးပေစွန်းနေပါတယ်။
တည့်တည့်ပြောရမယ်ဆိုရင် မောင်တောမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သွေးတွေဟာ AZG တို့ ACF တို့လို NGO တွေရဲ့လက်တွေမှာ ပေစွန်းနေတယ်။ သူတို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ ပေကျံနေတယ်။ သူတို့နေ့တိုင်း ညစာစားတဲ့ ပန်းကန်ပြားတွေမှာ မောင်တော နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သွေးတွေ စီးကျနေတယ်။
ဒီလိုမျိုး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ (humanitarian aids) က ကောင်းကျိုးမပေးပဲ ဆိုးကျိုးပေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ ဒီလို ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှာ သာမက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်ဖူးတယ်။
(၁) ရ၀မ်ဒါ။ ၁၉၉၄ နဲ့ ၁၉၉၆ အကြား ဇိုင်ယာနိုင်ငံမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ရ၀မ်ဒါ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ တကယ့် ဒုက္ခသည်အစစ်တွေ နဲ့ မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှာ ပါဝင်သူတွေ ရောနှောနေခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ဒုက္ခသည် အယောင်ဆောင် တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကပဲ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်တယ်။ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာ နေ့စဉ် ဒေါ်လာသန်းချီတဲ့ ပမာဏနဲ့ ၀င်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကို ချယ်လှယ်တယ်၊ သုံးစွဲတယ်။ အဲဒါတွေထဲကနေ တစ်လ တစ်လကို ဒေါ်လာသန်းချီပြီးခိုးတယ်။ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ လိုအပ်တဲ့ ကား၊ ယာဉ်၊ ဆက်သွယ်ရေး အစခပ်သိမ်းကို ဒုက္ခသည်ထောက်ပံ့မှုကွန်ရက်ကနေ အလကားရတယ်။ ဒါတွေကို သုံးစွဲ အင်အားဖြည့်တင်းပြီး မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေကို လုပ်လိုက်တာ လူပေါင်း နှစ်သိန်းကျော် သေတယ်။ ဒါ့အတွက် ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲ။
(၂) ၁၉၉၁-ခုနှစ်၊ အီရတ်ပိုင် ကာဒစ္စတန်ဒေသ။ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု ဒဏ် ကို ခံစားရလို့ ကာ့ဒ်လူမျိုးတွေ တူရကီနယ်စပ်ကို အလုံးအရင်းနဲ့ ထွက်ပြေး ကြတယ်။ (တကယ်တော့ ဒီလိုဖြစ်ရတာလည်း အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ် တွေက ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲကာလအပြီးမှာ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကို ပုန်ကန်ဖို့ မြှောက်ပေးတဲ့ အတိုင်း ထကြွမိလို့ ဖြစ်ရတာ။) ဒုက္ခသည်တွေအလုံးအရင်းနဲ့ မိမိရဲ့မဟာမိတ် တူရကီနိုင်ငံထဲကို ၀င်လာရင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်သွားမှာအမေရိကန်က စိုးရိမ်တဲ့အတွက်၊ တစ်ဘက်မှာ ဒုက္ခသည် အဖြစ် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ဖက်မှာ အီရတ်ပြည်တွင်းဘက်ကို လူတွေကို မျှားခေါ်တဲ့အနေနဲ့ အတွင်းဘက်မှာ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ ပေးဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီတော့ လူတွေဟာ အန္တရယ် ကင်းရာနယ်စပ်ဖက်ကို ရောက်လာရမယ့်အစား အန္တရယ်ရှိတဲ့ ဧရိယာ နယ်နမိတ် ထဲမှာပဲ ရှိနေကြတော့တယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကို ဒီမှာ စာရင်းချနေရင် ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင် ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
ဖီအိုနာ တယ်ရီ ဆီကရတဲ့ ထူးခြားတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတစ်ခုကတော့ refugee-warrior ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်တယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ဒုက္ခသည်အရေခြုံနေထိုင်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကို ဆိုလိုတယ်။
တရားဝင်အားဖြင့်ပြောကြစတမ်းဆိုရင် လက်နက်ရယ် တိုက်ခိုက်ခြင်းရယ် တို့ကို လုံးဝစွန့်လွှတ်လိုက်မှသာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခံယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ မှာ အဲသလိုဖြစ်မနေပါဘူး။ လက်နက်မကိုင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းအရိပ် အောက်မှာ ခိုလှုံပြီး နောက်တစ်ကြိမ် သတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နိုင်အောင် ကြံစည်နေသူတွေဟာ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ ရှိနေတတ် ပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးတွေကို လက်တွေ့ကွင်းထဲမှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဖီအိုနာ တယ်ရီ က ဒီလိုလူတွေကို အမည်သစ်ပေးပါတယ်။ ဒုက္ခသည်-တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ (refugee-warriors) လို့ခေါ်တယ်။
စစ်ရေးပါရဂူတွေကပြောတယ်။ စစ်တိုက်တယ် ဆိုတာ ထောက်ပို့ရေး (logistics) နဲ့ တိုက်တာတဲ့။ ဒီတော့ ခေတ်သစ်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ ထောက်ပို့စနစ်တွေ အကုန်လုံးပါဝင်တဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ၀င်ခိုနေကြတော့တယ်။ ထောက်ပို့စနစ် မလိုတော့ဘူးလေ။ တပ်သားတွေကို ရိက္ခာပေးစရာမလိုဘူး၊ ဆေးကုပေးစရာ မလိုဘူး။ အလွန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာနဲ့ စစ်တပ်ထောင်လို့ရတယ်။ အာဖရိကတိုက်မှာ ဒီလို ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။
မိမိတို့ ကူညီပေးမယ့် လူဦးရေထုအတွက် OIC လို (နိုင်ငံတကာရဲ့ အကြမ်းဖက်သမား အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကို လက်မခံတဲ့) အဖွဲ့မျိုးက မဟာဗျူဟာချမယ်။ ငွေကြေးခွဲဝေချ ထားပေးတယ်။ AZG လို ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ အဖွဲ့မျိုးက ဥရောပ တိုက်သား လူဖြူမျက်နှာဖုံးတွေဖုံးပြီး အဲသည်ပိုက်ဆံတွေကို လိုအပ်တဲ့ နေရာ အရောက် ပို့ပေးမယ်။ အဲသည်နေရာမှာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ အနေနဲ့ နေထိုင်ပြီး သူလျှိုလုပ်မယ်။
ဒါမျိုးက သူတို့လုပ်နေကျ အလုပ်တွေ။
ကျွန်တော် လုပ်တဲ့ အိမ်စာ
AZG ဆိုတဲ့ အိမ်စာကို တွက်ချက်ကြည့်ရင် အောက်ပါတို့ကို တွေ့ရှိပါတယ်။
AZG နဲ့ ပတ်သက်လို့ စာရေးသူရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေ သုံးသပ်ချက်တွေ အကြံပြုချက်တွေ ကို ဒီလို ချရေးမိပါတယ်။
(၁) AZG ၀င်လာတယ် ဆိုကတည်းက သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်အကျိုးခံစားခွင့်ပေး လူဦးရေထု (target population) ဟာ (ရိုဟင်ဂျာလို့ သူတို့ခေါ်တဲ့) နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဘင်္ဂါလီတွေ သာလျှင် ဖြစ်တယ်။
(၂) AZG ရဲ့ မြန်မာပြည်တွင်း အဓိကရည်မှန်းချက် (primary goal) က အဲသည် ဘင်္ဂါလီတွေ အရေးအတွက် ပြောဆိုရေးသားတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ (advocacy) အတွက်သာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် AZG ဟာ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ ၀င်ရောက်လာတဲ့ iNGO ဖြစ်တယ်။
(၃) ၂၀၁၀-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၉)ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် အမတ် ခရစ္စတိုဖာ စမစ်သ်က ကွန်ဂရက်ကို တင်သွင်းတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်အပြည့်အ၀ပေးစေရေး ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို တင်သွင်းရာမှာ MSF ရဲ့ ပြောဆိုချက် ကို ကိုးကားသွားခဲ့တယ်။ MSF က ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေဟာ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ လူအုပ်စု ဆယ်မျိုးမှာ တစ်မျိုးအပါအ၀င် လို့ ရေးသား ထားတယ်။ ဒီလိုမျိုး MSF (AZG ရဲ့ မိခင်အဖွဲ့) က ကမ္ဘာသိ လိုက်လံ ပြောကြား နေတာဟာ မြန်မာပြည်တွင်းရေးကို အားမနာလျှာမကျိုး လိုက်လံစွက်ဖက် နေတာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာကို ထိပါးနေတာ သာလျှင် ဖြစ်တယ်။
(၄) AZG ဟာ သူတို့ရဲ့ ရုံးတွင်းစာတွေမှာ၊ မြန်မာပြည်ပမှာ ပြောဆိုရေးသားရာမှာ နယ်စပ်ကျော်ကူး ဘင်္ဂါလီတွေကို ရိုဟင်ဂျာ လို့ အမြဲတစေ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲတယ်။ ဒီလို တစ်ခါသုံးစွဲတိုင်း သုံးစွဲတိုင်းမှာ ရခိုင်မူမျိုးတွေရဲ့တည်ရှိမှုကို ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခါစီ လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာပိုင်ဆိုင်မှုကို စော်ကားမှု တစ်ခါစီ လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။
(၄) AZG ၀န်ထမ်းဟောင်း ဦးကျော်လှအောင်အပါအ၀င် မူဆလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီတွေက AZG ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လိုအပ်သလို ချယ်လှယ်နိုင်အောင် ခွင့်ပြု ထားတာဟာ မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်မဟုတ်။ တမင်သက်သက် လုပ်စေခြင်း ဖြစ်တယ်။ AZG ရဲ့ အရင်အမြစ်တွေကိုသုံး AZG ကားကို တစ်ဝီ၀ီ စီးပြီး စစ်တွေမှာ သွားလာ လှုပ်ရှားနေခဲ့တဲ့ ဦးကျော်လှအောင်ကို ပမာနှိုင်းမယ်ဆိုရင်၊ ရ၀မ်ဒါ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီလှိုင်းကို တက်စီးခဲ့ကြတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ အလားတူ နိုင်ပါတယ်။
(၅) AZG ဟာ ဇွန်လ ဘင်္ဂါလီဆူပူမှုနဲ့ ဆက်စပ် ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ၀န်ထမ်း ဦးကျော်လှအောင် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အားကြိုးမန်တက်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ သူ လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ ကျပ်ငွေ (၄၉)သိန်း ခန့် ဆုချီးမြှင့်ပြီး အငြိမ်းစားပေးကာ ရန်ကုန်မှာထားရှိတယ်။ AZG အဖို့ရာ ဘင်္ဂါလီတိုက်ခိုက်ရေးသမားများဟာ ဆုချီမြှင့် ရမယ့် သူရဲကောင်း တွေဖြစ်တယ်။
(၆) ဒေါက်တာအေးမောင် ပြောသလို နိုင်ငံတကာက လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးချင်ရင် မြန်မာအစိုးရ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကတစ်ဆင့်ပေးပါ။ မှန်ပါတယ်။ ဒါ့တင်လား ဆိုတော့ ဒါနဲ့တင် မလုံလောက်သေးပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ လူ့အသိုက်အ၀န်း က စောင့်ကြည့်ပြီး community watch လုပ်ရမယ်။ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ NGO တွေသာမက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုလည်း transparency ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရှိ အလုပ်လုပ်ခိုင်းရပါမယ်။
(၇) ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညံ့ဖျင်းပုံကို လျှောက်ပြောနေရင် အမုန်းပွားရုံပဲ ရှိမယ်။ စာရင်းကိုင်ဘယ်သူကို ရခိုင်ဝန်ကြီးဘယ်သူက ငွေစာရင်းလေး အဆင်ချောအောင် ရေးပေးဖို့ ပိုက်ဆံဘယ်နှစ်သိန်း မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တယ် ဆိုတာကအစ ကြားတဲ့လူက ကြားဖူးပြီးသား။ ဒီတော့ ထောက်ပံ့ကူညီရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေ ကို ရပ်ရွာစောင့်ကြည့်သူတွေ အမြဲသိနေနိုင်အောင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (transparency) ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သဲချောင်းဘင်္ဂါလီစခန်း ဟာ အနုမြူ စက်ရုံတွေနဲ့ တကွ ဖြစ်သွားတာကို နေပြည်တော်ကို တာဝေးပစ် ဒုံးကျည်ထိမှ သိရတယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားကုန်နိုင်တယ်။
(၈) ရခိုင်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်တဲ့ ဆိုတဲ့ “ရှုခင်းသာ” ဆေးခန်းကို စစ်တွေမြို့ခံတွေ ကန့်ကွက်လို့ မဖွင့်လိုက်ရဘူး။ ဒါပေမဲ့ AZG က တောင်းဆိုလို့ ဆိုပြီး ဆောက်ပေးနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ အတွက် ဆေးခန်းနှစ်ခန်း ရှိသေးတယ်။ ဒီနေရာတွေ မှာ လည်း AZG ရဲ့ ပါဝင် ပတ်သက် နေမှုကို ဖယ်ရှားပစ်ရပါမယ်။
(၉) ဒါတွေကို ဆောက်ဖို့လိုအပ်ငွေကို ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးရံပုံငွေက ထုတ်ပေး တာလို့ သိရတယ်။ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ယူသုံးစွဲထားတဲ့ ကျပ်ငွေ (၁၅၃)သိန်းခန့်မှာ သိန်းတစ်ရာဖိုးကိုပဲ စာရင်းပြရသေးတယ်လို့သိရတယ်။
(၁၀) AZG ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အကြိမ်ကြိမ် ထိပါးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ ထိပါးတိုက်ခိုက်သူတွေကိုလည်း ပုံအော အကူအညီပေးခဲ့ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် AZG ကို မြန်မာပြည်ထဲမှာ လုံးဝမထားပဲ ဖယ်ထုတ်ပစ်သင့်တယ်။ ဒီလိုဖယ်ထုတ်ရာမှာ AZG လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား တွေအတွက် လုပ်ပေးနေ တဲ့ အရောင်ပြစီမံကိန်း (alibi project) တွေကို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း တွေ လက်လွှဲလုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်သင့်တယ်။
(၁၁) AZG ကို ဖယ်ရှားရုံမျှမက ရှေ့ကပြောခဲ့သလို AZG ရဲ့ foot-in-the-door နည်းစနစ်နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ သူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာကို သိအောင် ဖော်ထုတ်ရပါမယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေထဲက ဘယ်သူတွေ ရှိသလဲ။ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်တိုင်းမှူးရော ပါသေးလား၊ ရခိုင် ၀န်ကြီးချုပ်ကော ဘယ်လိုလဲ၊ ကျန်မာရေး ရခိုင်ပြည်နယ်မှူးလား၊ ရခိုင်ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီးလား။ အစရှိသဖြင့် ဒီလိုမျိုး စိစစ်ပြီး AZG ရောဂါဝင်နေတဲ့ သစ္စာဖောက် ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်သင့်တယ်။
A သုံးလုံးကိုရှောင် အိုတောင် မဆင်းရဲ
‘ကုလား’ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတို့ ရုံးတွေမှာ ပြောဆို သုံးစွဲခြင်းမပြုရဆိုပြီး AZG တို့ ACF တို့ AMIတို့လို ကုလားဝင်စား NGO တွေက သတ်မှတ်ထားတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီ။ သူတို့ ရုံးတွေထဲမှာ ကုလားထိုင်ကို ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူးလို့ ရယ်သွမ်းသွေးရတာ ကြာပါပြီ။ မြန်မာပြည်မဖက်ကလူတွေကတော့ ဒီလို ‘ကုလား ဟု မခေါ်ရ’ ပညတ်ကို ကြားဖူးတာ လပိုင်းလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဘင်္ဂါလီကုလားရွာတွေကလွဲလို့ ရွာနီးချုပ်စပ်က ရခိုင် ဗမာ တိုင်းရင်းသားရွာတွေကို ဆန်တစ်စိမှ မရောက်စေရအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြံဖန်ဆောင်ရွက်တာမျိုးအပြင်၊ ‘ကူညီထောက်ပံ့ရေး’ အားဖြင့် ပျက်စီးစေခဲ့တာ အများကြီးပါပဲ။ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပျက်စီးစေခဲ့တယ်။
ဘင်္ဂါလီ တီဘီရောဂါသည်တွေကို AZG က နှစ်တွေ ဆယ်ချီပြီး ကုသပေးလာတာ ရောဂါသည် ဦးရေဟာ လျော့ကျမလာပဲ တိုးတိုးလာတယ်လို့ ဆိုတယ်။ (တီဘီ ရောဂါရှိသူနဲ့မိသားစုကို ထောက်ပံ့တဲ့ ပမာဏက မက်ရောက်စရာ ဆိုတော့ ကုလားတွေ ကိုယ်တိုင် ရောဂါမကူး ကူးအောင်လုပ်နေကြတယ် လို့ဆိုတယ်။) ဒီလို တိုးလာတာကိုလည်း အကြောင်းရင်းမရှာပဲ ထောက်ပံ့တဲ့ အလှူရှင် ဆိုသူတွေက ဘာကြောင့်ထောက်ပံ့နေကြသလဲ။
ဘင်္ဂါလီတွေနေတဲ့ ကျေးရွာတွေကို ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ဆန်တွေ အလျှံပယ် ထောက်ပံ့နေလေတော့ ဆန်ဈေးကျတယ်။ ဒီတော့ ကုလားလယ်သမားတွေ နစ်နာတယ်။ လယ်စိုက်မယ့်အစား တီဘီရောဂါသည် ထောက်ပံ့ကြေးယူနေတာကမှ တွက်ချေကိုက်ဦးမယ် ဆိုတဲ့ တွက်ကြေးတွေဖြစ်လာတယ်။
လယ်သမားတွေ တောင်သူတွေအတွက် ပိုးသတ်ဆေးတွေကို အရမ်းကာရော စနစ်မရှိ ဖြန့်ဖြူးခဲ့တာတွေကြောင့် ဂေဟစနစ်တွေ ပျက်စီးကျန်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။
ဒီတော့ ကောင်းဖို့အတွက် လုပ်တာကောင်းရမှာပေါ့ ဆိုပြီး လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီ (humanitarian aids) တွေဟာ ကောင်းကျိုးကို အမြဲတမ်းဖြစ်စေတယ် လို့ ဆိုကြတာဟာ မမှန်ပါဘူး လို့ ဖီအိုနာ တယ်ရီ က ပြောတာဟာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် အကူအညီတွေက ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေနိုင်ဘူး (do no harm) ဆိုတာ လက်တွေ့မှာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ သူမက အခိုင်အမာ ဆိုတယ်။ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီ (humanitarian aids) တွေမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (side effect) တွေ အမြဲတမ်းရှိတယ် လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
AZG ရဲ့ သရုပ်သကန် အမှန် ကို ဆန်းစစ် အံထုတ်ခြင်း (အပိုင်း နှစ်)
by Coral Arakan News Agency on Monday, October 22, 2012 at 1:08am ·
AZG ရဲ့ သရုပ်သကန် အမှန် ကို ဆန်းစစ် အံထုတ်ခြင်း (အပိုင်း တစ်) မှ အဆက်
လှတဲ့ ချစ်နဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ လွမ်းခန်းကို ရောက်ခဲ့
ကိုငြိမ်းမောင်က ဒီနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့) မွန်းလွဲမှာ ခဏတွေ့ချင်တယ် ဆိုလို့ သူနဲ့သူ့မိတ်ဆွေ နှစ်ယောက်ကို ချိန်းတွေ့ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ကျရင် ရန်ကုန်မှာ HIV ဝေဒနာရှင်တွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Pheonix Association ရယ်၊ MPG (Myanmar Positive Group) ရယ်၊ 3N Network ရယ် တွေ့ပြီး စစ်တွေက ဝေဒနာရှင်တွေကို ဘယ်လိုဆက်လက် လက်လွှဲယူကြရယ့်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြမယ့် သဘောကို ကြားရတယ်။
နောက်ထပ်ပြည်တွင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က စစ်တွေဝေဒနာရှင်တွေကို စစ်တွေမှာ တာဝန်မယူနိုင်သေးတဲ့ ကြားကာလမှာ AZG ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဦးဆောင်ပြီး ကိုငြိမ်းမောင်တို့ ရုံးခြံဝင်းလေးမှာ ဆေးပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ AZG ဆရာဝန်တွေလည်း စစ်တွေမှာ တစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ် လို့ဆိုတယ်။ AZG ဆရာဝန်တွေ နှစ်သုတ်ခွဲပြီး ရန်ကုန်ကို တက်သုတ်နှင်ကုန်ကြပြီ။
ကိုငြိမ်းမောင်တို့ မိတ်ဆွေတွေ အဆင်ပြေကြမှာမို့လို့ ကျွန်တော် ၀မ်းသာပါတယ်။ သစ်မရခင် ၀ါးပေါင်းကွပ် တဲ့သဘော ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ် လို့ ကျွန်တော် ဖြေပါတယ်။ မြို့က လူတွေ လည်း အနှောင့်အယှက် မပေးလောက်ဘူးထင်ပါတယ် လို့ ကျွန်တော် ဖြေခဲ့တယ်။ ဒါက လွဲလို့ တခြား ဘာ ပရိုဂရမ်တွေ၊ ပရောဂျက်တွေ မလုပ်ဖို့ တော့အရေးကြီးတယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောကြတယ်။
သူတို့ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထွက်အလာမှာ ဖုန်းတစ်ကော လာတယ်။ မနက်ဖန် ဆယ်နာရီမှာ ပြည်နယ် ရဲမင်းကြီးက အစည်းအဝေး ဖိတ်ထားလို့ လာခဲ့ပါဦးတဲ့။ မြို့နယ် တရားသူကြီးအပါအ၀င် နောက်ထပ် ခုနစ်ယောက်လောက်ကို ဖိတ်ထားပါတယ် တဲ့။
ဆန္ဒပြပွဲတိုင်းလိုလိုမှာ ပါနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြည်နယ်ရဲမင်းကြီးရုံးခန်းမှာ လုပ်မယ့် အစည်းအဝေးကို ဖိတ်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားတယ်။ မြို့နယ် တရားသူကြီးပါ ပါဦးမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကျောချမ်းသွားတယ်။ ရိုးရိုး သားသား လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လို့ ကျွန်တော် ဖြေသိမ့်တွေးလိုက်တယ်။
ကဲ . . . လွမ်းခန်းကို ရောက်ပါပြီ။ အဖမ်းမခံရသေးရင် စာဆက်ရေးပါဦးမယ်။
*ကိုငြိမ်းမောင်၏ နာမည်ကို ပြောင်းလဲရေးသားထားပါသည်။
Previous Akyabians and Aliens in Arakan
Next ရကပလကျဟောငျး ရဲနီ စံရှမေောငျ (အပိုငျး-တဈ)